သျှင်နေမင်း: February 2011
ငါ့ ဘ၀ကိုထဲ ၀င်လာခဲ့ ပါချစ်သူ
ငါ့ အသားတွေဟာ မင်းအတွက်အဟာရ
ငါ့ အသွေးတွေဟာ မင်းအတွက်စမ်းရေ
ငါ့ အရိုးတွေတွေဟာ မင်းအားကိုးရမဲ့ 
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:03 AM
ငါ .... အကြိမ်ကြိမ် ကျဆုံးခဲ့ဖူးလို့...
မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းတံခါးတွေ သော့ခတ်ပိတ်ထားပေးပါ...
ငါ ... အကြိမ်ကြိမ် ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးလို့ ...
မင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ စေ့စေ့ပိတ်ထားပေးပါ...
ငါ ... အကြိမ်ကြိမ် ရင်ခုန်စုံမက်ဖူးလို့...
မင်းရဲ့ ဖြားယောင်းမှုတွေ ရုတ်သိမ်းပေးပါဦး...
မင်း ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာက “အစစ်” တစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့လို့ပေါ့....။
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:48 AM
မောင်ချမ်းသာ(ဆိုက်ကား)နှင့် မနှင်းပုလဲ (ပဲပြုတ်)တို့၏ မင်္ဂလာဆောင်
တရားသူကြီး သုံးယောက်ရှေ့တွင် မောင်ချမ်းသာနှင့် မနှင်းပုလဲတို့ ခပ်ယို့ယို့လေး ရပ်နေကြသည်။ မောင်ချမ်းသာက ခေါက်ရိုး မပြေသေး သော လုံချည်အသစ် စက်စက်ကို သလုံးသားပေါ်အောင် ၀တ်ထား၏။ လျှော်ပြီးသား
အင်္ကျီလက်ရှည် အဖြူကို လက်တ၀က် ခေါက်၍ ထား၏။
မနှင်းပုလဲကတော့ မော်ရေးရှံ သက်တံရောင်နှင့် အပေါ်က အိရှံအဖြူလက်စကနှင့် ဖြစ်သည်။
သူတို့ နောက်တွင်တော့ မောင်ချမ်းသာ၏ ရောင်းရင်းများက ၀ါး ဦးထုပ်၊ စစ်ဦးထုပ် အစိမ်းပျော့ စသည့် ခေါင်းဆောင်း အမျိုးမျိုးကို လက်တွင်ကိုင်၍ စုပြုံ ရပ်နေကြ၏။
တရားရုံးရှေ့တွင်တော့ ဆိုက်ကားများ တန်းစီ ရပ်ထားသည်။
ယနေ့သည် ဆိုက်ကားသမားလေး မောင်ချမ်းသာနှင့် မနှင်းပုလဲတို့၏ လက်ထပ် မင်္ဂလာပွဲ ဖြစ်ပါသည်။
အလယ်ထိုင် နာယကကြီးက ရှေ့ဖတ်စာရေး ကမ်းပေးသော ရွှေရောင်ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် လက်ထပ်စာချုပ် ကပ်ထူရွက် နှစ်ရွက်ကို အသေအချာ စစ်ဆေးကြည့်နေ၏။
'အဘ ဦးသူတော်၏သား မောင်ချမ်းသာ အသက် ၂၆ နှစ်၊ ဟုတ်သလား' နာယကကြီးက စာချုပ်တွင်ပါသည်များကို ဖတ်၍ လှမ်းမေးလိုက်ရာ မောင်ချမ်းသာက မ၀ံ့မရဲ ခေါင်းညိတ်ပြသည်။
'အလုပ်က ဆိုက်ကား နင်းတယ်နော်'
'အဘ ဦးကွန်ပါ၏ သမီး မနှင်းပုလဲ၊ အသက် ၂၂ နှစ်၊ အလုပ်အကိုင် ပဲပြုတ်ဈေးသည်၊ ဟုတ်တယ်နော်'
မနှင်းပုလဲက ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိသဖြင့် မောင်ချမ်းသာကို လှမ်းကြည့်၏။ မောင်ချမ်းသာက လက်တို့၍ ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ မနှင်းပုလဲက တရားသူကြီးဘက်လှည့်ပြီး ကမန်းကတန်း ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်၏။
'အခု မင်းတို့နှစ်ဦး သဘောတူ လက်ထပ်ကြမယ် ဟုတ်ပြီလား'
နှစ်ယောက်လုံးက 'ဟုတ်ကဲ့' ဟု သံပြိုင် ဖြေလိုက်ကြသည်။
'မနှင်းပုလဲက အခု လက်ထပ်တာ ဘယ်သူ့ရဲ့ သွေးဆောင် ဖြားယောင်းခြိမ်းခြောက်ခြင်းမှ မရှိဘဲ မိမိရဲ့ ကင်းလွတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနဲ့ သဘောတူတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တစုံတယောက်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ သွေးဆောင်မှု၊ ဖြားယောင်းမှုကြောင့် လက်ထပ်ရတာလား ဆိုတာကို ဖြေပါ'
မနှင်းပုလဲက ဘာမှမဖြေဘဲ မောင်ချမ်းသာ ဘက်သို့သာ လှည့်ပြီး ငေးကြည့်နေသည်။
မောင်ချမ်းသာက ပခုံးချင်းတိုက်၍ မျက်ရိပ်ပြလိုက်၏။
'ကျွန်မ ကြိုက်လို့ ယူတာရှင့်'
နောက်က ဆိုက်ကားအဖွဲ့က '၀ါး' ခနဲ ရယ်လိုက်သဖြင့် နာယကကြီးက ခပ်တည်တည် လှမ်းကြည့် လိုက်သောအခါ မျက်နှာပိုးသတ်၍ ငြိမ်သွားကြသည်။
ဤလက်ထပ်ပွဲကို ကမကထ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော ရှေ့ဖတ်စာရေးမှာ ရယ်ချင်နေသော မျက်နှာထားကို ခေါင်းငုံ့၍ ဟန်ဆောင်ထားရသည်။
'ကဲ.. ကဲ.. ဟုတ်ပါပြီ၊ ဟုတ်ပါပြီ၊ လာ လာ ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးကြ'
လက်မှတ်ထိုးရမည့် နေရာကို ရှေ့ဖတ်စာရေးက ထောက်ပြသည်။ မောင်ချမ်းသာက အလျင် လက်မှတ်ထိုး၏။ ဒုတိယ မနှင်းပုလဲက တုန်တုန်ယင်ယင်နှင့် လက်မှတ်ထိုးရာ တလုံး တလုံးကို အတော်ကြာကြာ ရေးနေရ၏။ တရားသူကြီးများက စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ကြည့်နေကြ၏။
'သက်သေနှစ်ယောက် လာ လက်မှတ်ထိုးပါ' ဟု ရှေ့ဖတ်စာရေးက ခေါ်လိုက်ရာ၊ အောင်ဗလနှင့် လှကြည်တို့ နှစ်ယောက် အလုအယက် ထွက်လာကြပြီး သူအလျင် ကိုယ်အလျင် လုပ်နေကြသေးသည်။ နောက်မှ လှကြည်က အလျင် လက်မှတ်ထိုးဖြစ်သည်။
လက်မှတ်ထိုးခြင်းကိစ္စ ပြီးစီးကြသဖြင့် သတို့သားနှင့် သတို့သမီး တွဲ၍ ဆိုက်ကားအဖွဲ့ ခြံရံပြီး ရုံးတွင်းမှ ထွက်လာကြ၏။
အောင်ဗလက သပြေပန်းတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ လက်ကိုင်ထိပ်၌ ထိုးစိုက်ထားသော ဆိုက်ကားကို အလျင်ဆုံးထုတ်၍ လမ်းပေါ်တွန်းတင်လိုက်သည်။ ထိုဆိုက်ကားသည် သတို့သား မောင်ချမ်းသာပိုင် ဆိုက်ကားဖြစ်သည်။ အောင်ဗလက နေ့စဉ် သူနင်းနေကျ ဆိုက်ကားကို ယနေ့အဖို့ ဆိုက်ကားပိုင်ရှင်အိမ်က ထုတ်ယူမလာပေ။ မောင်ချမ်းသာ၏ ဆိုက်ကားကို ယူကာ နင်းပေးရမည် ဖြစ်၍ ဖြစ်၏။
အောင်ဗလနင်းသော ဆိုက်ကားပေါ်သို့ မောင်ချမ်းသာနှင့် မနှင်းပုလဲတို့ တက်ကြသည်။ မောင်ချမ်းသာ က ရှေ့ထိုင်ခုံမှာ နေရာယူ၍ မနှင်းပုလဲက နောက်ဘက်ခုံတွင် ယို့ယို့ကလေး ထိုင်လိုက်၏။ သူတို့နောက်မှ ဆိုက်ကား ဆယ့်နှစ်စီးက တန်းစီ၍ နေရာယူလိုက်ကြသည်။ တရားရုံးရှိ လူအားလုံးတို့သည် ထူးဆန်းသော မင်္ဂလာပွဲကြီးကို ပြုံးကာ ပြုံး၊ ရယ်ကာရယ်ဖြင့် ကြည်နူးစွာ လှမ်းကြည့်ကြလေ၏။
ဆိုက်ကား စထွက်တော့ အောင်ဗလက သူ၏ ညာဘက်လက်ကိုင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ခေါင်းလောင်းကို အဆက်မပြတ်တီးရင်း နင်းလာသည်။
'ဟေ့ကောင်အောင်ဗလ၊ ဘာလုပ်တာလဲကွ၊ လူတွေ ကြည့်နေကြပြီ၊ ရှက်စရာကြီး'
'ဟေ့ကောင် ချမ်းသာ၊ ငြိမ်ငြိမ်လိုက်လာစမ်း၊ တရုတ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင် ကားဟွန်းသံတွေ တညံညံနဲ့ ဒီလောက်တီးလာတာပဲကွာ'
'တို့လည်း တို့အထွာနဲ့ တို့ပေါ့ကွ၊ ဘီးပါတာပဲ၊ သူတို့က မော်တော်ကား၊ တို့က ဆိုက်ကား... ဟား... ဟား... ဟား...'
'ငါ မျက်နှာ ပူတယ်ကွ'
'မျက်နှာပူရင် မင်းနားရွက်ကားသားပဲ၊ နားရွက် နှစ်ဖက်နဲ့ ကာထားပေါ့ကွ'
'အစ်ကို... လုပ်ပါဦး၊ အစ်ကို့ လူတွေက အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့၊ ရှက်စရာကြီး'
မနှင်းပုလဲက နောက်မှ လှမ်းပြောသည်ကို နောက်ဆိုက်ကားနင်းလာသူ ကြည်မြင့်က ကြားသွားဟန်တူသည်။
'တို့ကတော့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ပဲဟေ့၊ လမ်းထောင့်က ဆိုက်ကားဂိတ်ဆိုတော့ ဆူဆူညံညံ ကားသံ၊ လူသံတွေ ကြားထဲမှာ ပြောရ ဆိုရမို့ အော်ပြောရတာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ၊ ရှက်ရင် ခေါင်းငုံ့ပြီး လိုက်လာ၊ ရောက်တော့မယ်'
'ဒီကလဲ ခုနစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြား အော်ပြီး ဈေးလိုက်ရောင်းရတဲ့ ပဲပြုတ်သည်ပါပဲ တော်၊ အခုဟာက လွန်လွန်းလို့'
မနှင်းပုလဲဆီက အသံထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ စိတ်ထဲက ရန်တွေ့ လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ဘက်မှ ဆိုက်ကားများသည်လည်း ဟွန်းနှိပ်သူနှိပ်၊ ခေါင်းလောင်းတီးသူတီးဖြင့် တသီတတန်းကြီး ဆူညံစွာ ထွက်လာကြလေသည်။
လမ်းတလျှောက် လူများ ထွက်ကြည့်နေကြသဖြင့် မောင်ချမ်းသာနှင့် မနှင်းပုလဲမှာ ရှက်လွန်း၍ ခေါင်းငုံ့ပြီးသာ လိုက်လာကြရလေသည်။
အိမ်ကလေးပေါ်သို့ စုပြုံ တက်လာကြသော အဖွဲ့ကြီးကို ကြည့်၍ မနှင်းပုလဲ၏အမေ ဒေါ်အေးမမှာလည်း အလိုလို ရွံ့သလိုလို ဖြစ်ပြီး ခေါင်းရင်းဘက် ဘုရားစင်ရှိရာ အောက်ဘက်သို့ ယို့ယို့ကလေး သွားထိုင်နေလေသည်။
လူဆယ့်ငါးယောက်၏ အလေးချိန် ဒဏ်ကြောင့် အိမ်ကလေးမှာ ယိမ်းထိုး လှုပ်ခါနေသည်။
'ဟဲ့.... ဟဲ့.... အ်ိမ်ပြိုပါ့မယ်'
အိမ်မှာ ထိုင်စောင့်နေကြသော မနှင်းပုလဲ၏ မိတ်ဆွေ အမျိုးသမီး အုပ်စုထဲမှ တယောက်က အော်လိုက်သည်။
'ကဲ... ကဲ... အခန်းအပ်ပြီး မင်္ဂလာသြဘာစကား ပြောရမယ်'
အောင်ဗလက အခန်းဝမှနေ၍ သံနေသံထားဖြင့် ဟန်ပန်ထုတ်၍ မိန့်ခွန်းခြွေရန် ပြင်လိုက်သည်။
'ဟေ့... အောင်ဗလ မင်းက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘာတတ်လို့ ပြောမှာလဲ၊ မလိုပါဘူးကွ၊ သူတို့နှစ်ယောက်ထားခဲ့၊ တို့က မရီဆိုင် ပြေးပြီး မင်္ဂလာအောင်ပွဲလေး ကျင်းပမယ်၊ ဒါပဲ'
လှအောင်က ကပြင်တွင် ထိုင်နေလျက်က လှမ်းကန့်ကွက်နေ၏။
'နေပါဦးကွ၊ ငါ့ ဆိုက်ကားရှင်သမီး သမ္မတမှာ လက်ထပ်တုန်းက သြဘာမင်္ဂလာစကားပြောတာ ကြားဖူးလို့ပါ့၊ ငါပြောတတ်ပါတယ်ကွ'
'ကဲ... ဒါဆို ပြောကွာ မြန်မြန်၊ ငါ လေပျို့လာပြီ'
ကိုချစ်တီးက နောက်ကျနေသဖြင့် လှေကားအ၀တွင် တစ်ဆို့ကြီး ရပ်နေလျက်က လှမ်းပြောလိုက်၏။
'ဒီလိုပါ ခင်ဗျ၊ အခု မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကတော့ ဆိုက်ကားပိုင်ရှင် မော်ချမ်းသာနှင့် ပဲပြုတ်ပိုင်ရှင် မနှင်းပုလဲတို့ရဲ့...'
'ဟုတ်ကဲ့၊ ပဲပြုတ်တောင်းပိုင်ရှင် မနှင်းပုလဲတို့ရဲ့ မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်'
'တော်ပြီဟေ့ သွားမယ်၊ ချမ်းသာ ပေးထားတဲ့ ခဲဖိုးပိုက်ဆံ ဘယ်သူ့ဆီမှာလဲ ဟေ့'
လှအောင်က ပြောရင်း အင်္ကျီအိတ်ကို ပုတ်ပြလိုက်သည်။
ဆိုက်ကား အဖွဲ့ကြီးက ဘဲလ်သံ ဆူညံစွာဖြင့် ထွက်ခွါသွားကြလေသည်။ မောင်ချမ်းသာတို့ နှစ်ယောက် အခန်းဝတွင် မောမောပန်းပန်း ထိုင်ချလိုက်ကြတော့သည်။
'အဲဒီလူတွေ ရုတ်ရုတ် လုပ်တာနဲ့ ကြိုးလည်း မတားလိုက်ရပါဘူးနော်' ဟု ဒေါ်မြမြ ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသမီးတစု ရယ်ရယ်မောမောဖြင့် ထွက်သွားကြလေသည်။
ဒေါ်အေးမကလည်း အလိုက်သိစွာ ဘေးအဖီ မီးဖိုဘက်သို့ ထွက်သွားသည်။
မနှင်းပုလဲသည် အခန်းတွင်းသို့ မရဲတရဲ လှမ်းကြည့်လိုက်၏။ ပြီးတော့ ရှက်စနိုးဖြင့် ခေါင်းငုံ့နေသည်။ ဤအခန်းသည် မနေ့ကအထိ သူ့အမေနှင့် သူ အိပ်နေကျ အခန်းဖြစ်၏။ ယခုတော့ ဤအခန်းပင် သူ့အတွက် မင်္ဂလာအခန်း ဖြစ်နေ၏။
အမေ့အိပ်ရာ ဖျာလိပ်က အိမ်ရှေ့ခန်း ခေါင်းရင်းဘက်တွင် လိပ်လျက်သား တွေ့ရ၏။
အခန်းတွင်းမှာတော့ နံနက်က မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်ဘေးက မမြနဲ့အတူ ပြင်ဆင်ထားသော အိပ်ရာ အသစ်စက်စက်ကို တွေ့ရ၏။ နှစ်ယောက်အိပ်ဖျာချော အသစ်စက်စက်ပေါ်တွင် ရွှေဘုံသာလမ်းက ဆိုက်ကားအုပ်စုက လက်ဖွဲ့အဖြစ်ဝယ်ပို့ထားသော ခေါင်းအုံးအသစ်စက်စက်နှစ်လုံးနှင့် ခြေရင်းတွင် အညာစောင် အသစ်စက်စက်က ခေါက်လျက် ပုံချထားသည်။ စိန်ဂျွန်းဈေးက အမေ သွားဝယ်ပေးထားသော နှစ်ယောက်အိပ် နိုင်လွန်ခြင်ထောင် ပန်းရောင်က အပေါ်ကမိုးလျက်...။
နံရံဘေးတွင် မနေ့က ကိုချမ်းသာ လာပို့ထားသော ဆေးပြယ်စ ပြုပြီဖြစ်သည့် အနက်ရောင် သံသေတ္တာ အဟောင်းတခုကလည်း အခန်းအတွင်း ပစ္စည်းအသစ် ဖြစ်သည်။ မိမိ အ၀တ်များထည့်သည့် ထန်းခေါက်ဖာက ခြေရင်းထောင့်တွင် ယခင်နေရာအတိုင်း ဖြစ်၏။ အမေ့သံသေတ္တာကလည်း ယခင်နေရာဟောင်းမှာ....။
မောင်ချမ်းသာက ပြုံးပြုံးကြီး မနှင်းပုလဲကို ကြည့်နေ၏။
မနှင်းပုလဲက မျက်စောင်းထိုး၍ မေ့မေ့လျော့လျော့ နှုတ်ခမ်းစူထားရမည့်အစား ပြုံးလိုက်မိ၏။
'အဟင်း... ဟင်း.. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့'
မနှင်းပုလဲက ပါးစပ်ကို လက်နှင့်အုပ်ပြီး ရုတ်တရက် အဆက်မပြတ် ရယ်ချလိုက်၏။
မောင်ချမ်းသာက မလုံမလဲ ပြုံးဖြဲဖြဲနှင့် လှမ်းမေးသည်။
ခုမှ တကယ် ရယ်စရာ တွေ့လိုက်ရ၍ မနှင်းပုလဲ ရယ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင်က အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခု လမ်းမှာ ကိုအောင်ဗလ ပြောမှ သတိထားကြည့်လိုက်မိသည်။ ကိုချမ်းသာ နားရွက်ကြီးက တကယ် ရယ်စရာ ကောင်းအောင် ကားကားကြီး တွေ့နေရ၏။ သို့သော် လူကြီးသူမများက ပြောဖူးသည်။ နားရွက်ကောင်းရင် ဥာဏ်ကောင်းသည်ကို...။
'ဟုတ်မှာပါပဲ၊ ဒါကြောင့် အစ်ကိုက ကိုယ်ပိုင် ဆိုက်ကားနဲ့ ဘာနဲ့ ဖြစ်နေတာ'
မနှင်းပုလဲ မျက်နှာပိုး ပြန်သတ်သွားသည်။
'နှင်းပုလဲဆိုတဲ့ နာမည်က ဆန်းတယ်ဟ၊ နင်နဲ့လိုက်တယ်၊ နင့်ကို ဘာကြောင့် ဒီနာမည် မှည့်ပေးတာလဲ... ဟင်'
'အို အကိုကလဲ၊ ကျွန်မကို နှင်းပုလဲမှာ မွေးတာတော့၊ ဒါကြောင့် အဖေက လွယ်လွယ်ပဲ နှင်းပုလဲလို့ ပေးလိုက်တာ'
'ဟာ... စိတ်ကူးပျက်လိုက်တာဟာ၊ ငါက ပုလဲလေးလို နင်က ဖြူလို့ ပေးတာလားလို့ သဘောကျနေတာ'
'ကျွန်မက ဖြူမှ မဖြူတာ၊ အစ်ကို မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲဟာ'
'အို.... ကြည့်စမ်း.... ခစ်..ခစ်..'
အိမ်ရှေ့ခန်းက အမေ ဒေါ်အေးမက ချောင်းတချက် ဆိုးလိုက်၏။ ဤတော့မှ အခန်းထဲမှ မနှင်းပုလဲတို့၏ အသံ တိတ်သွားလေသည်။
ခြင်္သေ့မင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် မနှင်းပုလဲအတွက် နံပြားစောင့်ရင်း မောင်ချမ်းသာနှင့် မနှင်းပုလဲတို့ လက်ဖက်ရည် ထိုင်သောက်နေကြ၏။ ဆိုက်ကားရှေ့ခုံပေါ်တွင်တော့ မနှင်းပုလဲ၏ ပဲပြုတ်တောင်းကား အငွေ့တထောင်းထောင်းနှင့်....။
မောင်ချမ်းသာသည် ဤ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးက စ၍ မိမိနှင့် မနှင်းပုလဲတို့ ရေစက်ဆုံစည်းမိ ကြသည်ကို ပြန်လည်တွေးနေမိ၏။
မောင်ချမ်းသာသည် တကောင်ကြွက်၊ ဆွေမရှိမျိုးမရှိ။ ရန်ကုန်တွင် မြို့သစ်လေး၌ ဆိုက်ကားနင်းစားသူ ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ကြိုးစားမှု၊ ချွေတာမှု၊ လိမ္မာမှုကြောင့် သူတပါးဆိုက်ကားကို နေ့ပေးအငှား နင်းလာခဲ့ရာမှ ဆိုက်ကားတစီး ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာသူ ဖြစ်၏။ မိမိနှင့် ဘ၀တူ ဆိုက်ကားဆရာ ကိုချစ်တီးအိမ်တွင် တလ လေးဆယ်ပေးပြီး နေခဲ့သူ ဖြစ်၏။
မနက်စောစော ဆိုက်ကားနင်းထွက်လာပြီး ဤလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လက်ဖက်ရည်တခွက် မှန်မှန် သောက်နေကျ ဖြစ်၏။ မနှင်းပုလဲကလည်း အခြား ပဲပြုတ်သည်များနှင့် အတူတူ ဤလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ နံပြားဝယ်နေကျ ဖြစ်၏။
မောင်ချမ်းသာက မနှင်းပုလဲကို နံနက်တိုင်း တွေ့နေ မြင်နေရာမှ မျက်စိကျလာသလို မနှင်းပုလဲကလည်း မောင်ချမ်းသာအပေါ် စိတ်ယိုင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် သူများတကာလို နေ့စားအငှားနင်းတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်ကားနှင့် တကိုယ်ရေ တကာယ နေသူဖြစ်မှန်း တခွန်းစ နှစ်ခွန်းစ မေးရင်း သိလာရတော့ အားကိုးလိုစိတ်ကလေးက ၀င်လာမိ၏။
နောက်တော့ သူတို့ချင်း သဘောမျှလာကြသည်။
အစ ပထမတွင် မောင်ချမ်းသာနောက်ပိုးပုံကလေးက ရယ်စရာကောင်း၏။
'ညီမ ပဲပြုတ်ကလေး ဆီဆမ်းပြီး နံပြားကလေးနဲ့ စားချင်တယ်ဗျာ။ ပဲပြုတ်နာမည်က ဘယ်လိုတဲ့တုံး'
'အို... အို... ယောင်လို့၊ လူနာမည် မေးတာပါ'
မနှင်းပုလဲက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ရင်း ရယ်မိသဖြင့် သီးသွားသည်။
ယခုတော့ တူနှစ်ကိုယ် တစားပွဲတည်း ထိုင်၍ လက်ဖက်ရည် သောက်နေရပြီ ဖြစ်၏။
'ဟောဒီ လမ်းထိပ် ချပေးရင် တော်ပြီအကို'
နှင်းပုလဲက သူရောင်းနေကျ နှစ် ရပ်ကွက် လမ်းထိပ်သို့ ရောက်သောအခါ မောင်ချမ်းသာကို ဆိုက်ကားရပ်ခိုင်းသည်။
ဆိုက်ကားပေါ်မှ လှမ်းဆင်းလိုက်ပြီး ပေါင်ပေါ် တင်ထားသော ပဲပြုတ်တောင်းကို ခေါင်းပေါ် ခေါင်းအခုယူ၍ ရွက်လိုက်သည်။
'နေပါဦးဟ၊ နင်အော်တဲ့ အသံလေးကြားချင်လို့၊ ပြီးတော့ ဘယ်အချိန် ဒီနေရာက လာကြိုရမလဲ ဆိုတာ မေးမလို့'
'အို... အကိုကလဲ ကျွန်မဘာသာ ပြန်ပါ့မယ်၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်စမ်းပါ၊ အလကား အမောခံပြီး လာကြို လာပို့ လုပ်နေရဦးမယ်၊ အကို အဲဒီအချိန် လူရနေတော့ ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ'
'သူများ လွှဲပေးလိုက်မှာပေါ့ဟ၊ ပြောစမ်းပါ၊ ဘယ်အချိန် ပြန်လာစောင့်ရမလဲ'
'ကဲ... ကဲ... ကိုယ်တော်ရယ်၊ အကိုတော့ ပိုက်ဆံမရဘဲ မောနေရမှာ စိုးလို့ ပြောတာ၊ ခါတိုင်း တနာရီ ကျော်ကျော်လောက် လှည့်လိုက်ရင် ကုန်တတ်တာပဲ'
'ဒီလိုဆို ငါလာခေါ်မယ်၊ လုပ်ပါဟ၊ ငါကြားအောင် အော်လိုက်စမ်းပါဦး'
နှင်းပုလဲက မျက်စောင်းလေး ပြုံး၍ ထိုးရင်း လမ်းကျဉ်းဘက်သို့ လှည့်ထွက်သွား၏။
မောင်ချမ်းသာအဖို့ကား နှင်းပုလဲ၏ အော်သံသည် မေဆွိသီချင်းသံထက် များစွာကောင်းကာ နားဝင်ချို သာယာလှပါသည်။
ကျေနပ်စွာပြုံး၍ ဆိုက်ကားကို မတ်တတ် အရှိန်ယူကာ နင်းချလိုက်ပြီးလျှင်-
'မောတော့ မောတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် မမောဘူး' ဟု သီချင်းကို ညည်းကာ ထွက်သွားလေသည်။
မနှင်းပုလဲသည် နောက်သို့ လည်ပြန်ကြည့်လိုက်ရာ ဆိုက်ကားဘီး ချိုင့်ထဲကျသွားသံကို ကြားရပြီး မြူနှင်းများ အကြားတွင် မှုန်၍ ပျောက်ကွယ်သွားသော လင်တော်မောင်အား သူရဲကောင်းကြီး စစ်မြေပြင်သို့ ထွက်သွားသည်ကို မျက်စိတဆုံး လှမ်းမျှော်၍ ကြည့်နေမိသော ဇနီးသည်ကဲ့သို့ ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်နေမိတော့၏။
[မြတ်လေးမဂ္ဂဇင်း၊ မေ ၁၉၈၆]
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:23 AM
ငါရေးတဲ့ငါ့ သမိုင်း
ထင်ရာမဆိုင်းခဲ့ ပါဘူး.......။ ။
ငါဘ၀ ငါ့ အကြောင်း
ငါယုံကြည်တဲ့ဝါဒ
ငါမြတ်နိုးတဲ့Rock သံစဉ်
ငါရေးဖွဲ့ တဲ့ကဗျာတွေဟာ
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:36 AM
Miss U Comments by Crazyprofile.com
အလွမ်းနဲ့ ပဲ ထိုက်တန်တဲ့ ကောင်
ငါနဲ့ အတူ မွေးဖွားလာတာပါ.....
ငါလည်း အလွမ်းတွေနဲ့ 
Posted by သျှင်နေမင်း at 4:12 AM
ဟဲ့ အေးသန်း...နံပါတ် ခိုင်ပြီလား...ဘယ်လောက်တဲ့တုန်း
မသေချာသေးဘူး အမေရေ ထိပ်စည်းကတော့ခိုင်နေပြီတော့၇ တဲ့
ဟေ...ဟုတ်လား အေး အေး သွားစမ်း လမ်းထိပ်မှာ သွားနားထောင်ချည်...ငါတို့ နံပါတ် ထွက်ရင် တခါတည်း နင့်အဖေကို ဂိတ်မှာ ဝင်ပြောခဲ့၊ ဆန်၎ဗူးလည်း တခါတည်း ဝယ်လာခဲ့ ကြားလား...ဟဲ့ ဟဲ့ နေအုံး ဟိုဟာ မီးမွှေး ဖို့ ထင်းရူးဆီကလေး တစည်းလောက်ပါ ဝယ်ခဲ့စမ်း အိုကေ...
အေးသန်းဖြင့် အိမ်အပြင် ပြေးထွက်တော့မဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တုန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ဟီးကနဲ တချက်ရယ်မိရသည်။ သူ့အမေ မခင်စိန်ရယ်လေ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွား နံပါတ်လိုက်ရင်း သင်္ဘောသားကတော် ဆိုလား အဲဒီအုပ်စုနဲ့ တွေ့ပြီးကာမှ စကားတခွန်း ပြောပြီးတိုင်း နောက်က တအိုကေ ထဲ အိုကေ နေတတ်သည်မှာ အဖေလို လူအေးကတောင် မျက်စောင်း ထိုးယူရသည့် အထိ။
အေးသန်း ခြေတွေကလည်း လမ်းထိပ်များ သွားရမယ်ဆို ဘီးတပ်ထားသလို ပြေးလွန်းလှ သည်။ ဂိတ်မှာ ကိုစိုး ရှိနေနိူင်သည် မဟုတ် လား။ ဘုရား သိကြားမလို့ ဂိတ်မှာ အဖေ ရှိမနေပါစေနဲ့ အဖေ လူရပြီး ဆိုက်ကား အငှား လိုက်သွားပါစေတော်...အေးသန်း ကြိတ်ဆု တောင်းရင်း ဂိတ်ဘက် မျက်လုံး တချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်သည်။ ဆုတောင်းက ပြောင်းပြန် ပြည့်သွားသည်။ ဂိတ်မှာ ကိုစိုးမရှိပဲ အဖေက ဆိုက်ကားပေါ် ခပ်လှဲလှဲ ထိုင်၊ ကွမ်းဝါးရင်း သူ့အလှည့် စောင့်နေလေသည်။
အေးသန်း လှစ်ကနဲ ကွမ်းယာဆိုင် အဖီလေးရှေ့ ပြေးဝင်ကာ အမလှငွေအား မေးလိုက်လေ သည်။
အမလှငွေ ဘာနံပါတ် ထွက်သွားတုန်းဟင်
ဟဲ့ ငါကြားတာတော့ ၇၂ ဆိုလားပဲ ဟဲ့ အောင်မြိုင် ဟဲ့ကောင် ထမင်းစား ဂဏန်းက ၇၂ မဟုတ်လား
အမလှငွေ က ဂိတ်မှာ ပါစင်ဂျာ စောင့်နေသော သူ့မောင် ကိုအောင်မြိုင်ကို လှမ်း၍ အတည်ပြု လေသည်။
ဟုတ်တယ် အမ ကျုပ်ကြားတာတော့ ၇၂ ပဲ
အဖေကတော့ အေးသန်းတို့ကို တချက် ငဲ့ကြည့်ကာ ဘာမှ ဝင်မပြော။ အဖေက ဒီလိုပါပဲ၊ ဆိုက်ကားနင်းလို့ ရသမျှ အမေ့ အကုန်အပ်မည်၊ အမေ ဆင်သမျှ ဝတ်မည်။ အမေ ချက်သမျှ ဘာဟင်းပဲ စားရ စားရ တချက် မငြီးရှာသူ၊ နှစ်လုံးတွေ ဘာတွေလည်း ဝါသနာလည်းမပါ၊ ကန့်လည်း မကန့်ကွက်သူ ဖြစ်လေသည်။
ဟယ် ဒါဆို အမေ ပေါက်တယ်တော့
အေးသန်း ပျော်လွန်း၍ ခုန်ပေါက်ကာ အမေမှာလိုက်သည်များကို အဖေ့အား အမြန်ပြောကာ ဈေးကို ဒုန်းစိုင်းပြေးတော့သည်။ ဈေးမှ ပြန်လာသော် အိမ်မရောက်ခင် တအိမ်ကျော် အလို ကပင် အမေကြားအောင် အော်ဟစ် ဝင်လာလေသည်။
အမေရေ အေးသန်းတို့ နံပါတ်တော့၊ အေးသန်းတို့ ပေါက်ပြီ...ဟီးဟီး ပျော်လိုက်တာ အမေနော် အမေ့ကတိအတိုင်း ကျုပ်ကို ဝယ်ပေးရမှာပဲတော့ ဒီနှစ် ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲမှာ အသစ်ဝတ်ချင်တာ နော် လို့
အေးပါအေ အေးပါ ပေးစရာရှိတာတွေ ပေးပြီး ညည်းလိုချင်တာ ဝယ်ပေးမယ် အိုကေ
အိုကေ အိုကေ ဟီးဟီး
ဒီတခါတော့ အေးသန်းကိုယ်တိုင်ပင် စိတ်ပါလက်ပါ ပြန်အိုကေရင်း သူဝတ်ချင်သော အင်္ကျီအသစ်လေးအား မျက်စိထဲ ကွင်းကနဲ ကွက်ကနဲ မြင်ယောင်နေရှာလေသည်။
ဟယ် ဒေစီရယ် ၇၂ တဲ့ဟယ် နင်တို့ကလေ ငါမို့ ပြောရင် အလေးအနက် မရှိကြဘူး တကယ်ပဲ
မမဒေဝီကလည်း မမကဖြင့် အပိုင်ပြောတာလည်း ဟုတ်ပဲနဲ့ ဟုတ်နိူးနိူးနဲ့ မသေချာတဲ့ဟာကို
အမယ် ငါပြောပါတယ် ဘုန်းကြီးက ပုဝါကြီး ခေါင်းခြုံပြနေတာ ပါဝါချိန်းမှာလို့ ပြောနေသားပဲ
မမကလည်း ဘုန်းဘုန်းက တောတောင်ထူထပ်မယ် ချည်းပြောနေတာ မမပဲ ၇ ပူးထွက်မှာ ဆို
အေးလေ ခုလည်း ပါဝါ တလုံးချိန်းပြီး ၇၂ ထွက်သွားတာပဲဟာ
ဟမ် မမကလည်း ပေါက်ဖော်မကြီး လုပ်နေပြန်ပြီ ဟားဟား ကဲပါ မမရယ် ၁၀ သိန်းဖိုး လောက်ကလေးများ တွေးမနေပါနဲ့ မမသက်တို့နဲ့ ချိန်းအုံး မနက်ဖြန် မနက် အိမ်ကကားနဲ့ပဲ သွားမှာလား သူတို့လာခေါ်မှာလားလို့
အေးပါ အေးပါ တော်သေးရဲ့ ၄ ယောက် စပ်ထိုးလို့ တယောက် ၂သိန်းခွဲလောက်ပဲ ကုန်တာ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေဝီတို့ ညီအမက ဒါကိုပဲ ပျော်နေရလေသည်။ သူတို့မှာ ဒီလိုမျိုး နံပါတ်အတွက် ဘုန်းကြီးနောက်လိုက်ရင်းနဲ့မှ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ရသည် မဟုတ်လား။ အပျိုကြီး မမမြ ဆိုလည်း ခင်စရာ အလွန်ကောင်း သည်။ ဆရာဝန်ကတော် ချိုသဲဆိုလည်း သူတို့ထဲမှာ အငယ်ဆုံးပေမဲ့ လူကြီး အဆန်ဆုံး၊ ကလေးမရှိတော့လည်း လွတ်လပ်စွာပင် သူတို့နှင့် အဖွဲ့ ကျကာ ညီအမရင်းများသဖွယ် ဖြစ်နေရသည်။ သူတို့ ၄ယောက် အဖွဲ့ အတွက် နံပါတ်ထိုးခြင်း သည် အပျော်မျှသာ။ မိဘများ ထားခဲ့သော အမွေကပဲ မနဲမနော၊ တလ တလ အစုစပ်ဝင် ထားသည့် လုပ်ငန်းများက ရသည်ပင် သုံးမကုန်။
ချိုသဲရေ မနက်ဖြန် မမဒေဝီတို့ လာဝင်ခေါ်မယ်လေ နော် ချိုသဲကားကြီး ထားခဲ့လိုက် ဟုတ်ပြီလား အေး အေး ဪ ဟို ချိုင်းစာရွက်တွေ မမေ့နဲ့အုံး ကွမ်ရင်ချိုင်းရော၊ ဝါစိန္တချိုင်းရော အေးအေး ဒါပဲနော်
ဟယ်လို မမမြလား ဒေဝီပါ မမရဲ့ အင်းလေ ပလုံတာပဲ မမရေ ဟင်းဟင်း ဒါပေမဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့ နောက်တခေါက်ပေါ့ မမရယ် မနက်ဖြန် ခေါင်းချင်းဆိုင် ကြတာပေါ့နော်...အင်းအင်း ဝင်ခေါ်မယ်နော်မမ ဟုတ်ကဲ့ မမမြ
ဒေစီရေ မယုကြီးရော ဘယ်လိုလဲ ဖုန်းဆက်ကြည့်စမ်းပါအုံး
မဆက်တော့ဘူးလေ မမဒေဝီ ၊ သူ့ဘာသာ လာခဲ့မယ်လို့ ပြောလိုက်သားပဲဟာ ဟိုကျမှ တွေ့ကြတာပေါ့
မယုက သင်္ဘောသားကတော်၊ ငါးကြင်းဆီနှင့် ငါးကြင်းကြော်သူ၊ ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံနဲ့ မထိုးသူ ကော်မရှင်စား ဖြစ်လေသည်။
ဒေဝီတို့ အုပ်စုက မယုဆီကပဲ ထိုးနေကျ၊ ထိုးသားများလေ မယုအတွက် ကိုက်လေ...၊ ၅% ကော်မရှင် ရတာကို ပြန်ထိုးတာနဲ့တင် တွက်ခြေကိုက် သည်။ မပေါက်ရင် အရင်း၊ ပေါက်ရင် အမြတ် အလုံးအရပ် လျော့စရာ မရှိသူ ဖြစ်လေသည်။
ဟင် အဘ မရှိဘူးလား
ဟယ် ဟုတ်ပါရဲ့ ဒီ ဘလက်ဘုတ်မှာ စာရေးသွားတယ်တော့
အပြင်သွားသည် နေ့လည် ၁း၅၇ တွင် တရားဟောပါမည်
မောင်ရွှေ ဒါဆို ခုမနက် အဘ တရားမဟောဘူးပေါ့
မဒေဝီက အဘရဲ့ ကပ္ပိယ အမျိုးသားကို အတည်ပြုသလို လှမ်းမေးရင်း ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကဲ ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုသည့် သဘောမျိုး မျက်ခုံးကလေး လှမ်းပင့်ပြလေသည်။
ကဲပါလေ အိမ်ပြန်မနေကြပါနဲ့တော့ ဆလွန်းသွား၊ မျက်နှာဆေး၊ ခေါင်းလျှော်ကြရအောင်ပါ
သူ့ဘာသာပဲ ပြောလည်းပြော၊ ဆုံးလည်း ဆုံးဖြတ်ကာ ကားပေါ်တက်ရင်း နောက်ပြန်ဆုတ် ကာ ချိုးကွေ့လိုက်လေသည်။
ခြံဝင်းထဲက ထွက်လာသော သင်္ဘောသားကတော် အုပ်စု၏ ကားလေးကို မြင်တော့ မခင်စိန် ခေါင်းလေး ငဲ့ကြည့်ကာ ပြုံးပြမိသည်။ ကားလေးကလည်း အကွေ့မို့ အရှိန် လျှော့ချမောင်းရင်း ကားမှန်တချပ် ပွင့်လာကာ ခေါင်းအပြင် ထွက်ရင်း လှမ်းပြောလေသည်။
အမ စိန်စိန်ရေ အဘ မရှိဘူး သိလား နေ့လည်မှ ဟောမယ်တဲ့ ဒေစီတို့ သွားပြီနော် နေ့လည်မှ တွေ့မယ် အိုကေ
ဟင် ဟုတ်လား အိုကေ အင်းအင်း
တတ်နိုင်ပါဘူးလေ...အိမ်ပြန်လို့ လမ်းစရိတ် ကုန်မှာထက်စာရင် ဒီလမ်းထိပ် လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ကပဲ စောင့်ရတာပေါ့။ မနေ့က ပေါက်ထားပေမဲ့ ဝယ်စရာ ခြမ်းစရာ၊ ပေးစရာ ဆပ်စရာတွေ ဝယ်ပြီး၊ ပေးပြီးတော့ လက်ထဲ ဘာကျန် တော့လို့လဲ။ အေးသန်းအတွက် အင်္ကျီ အပြင် ယောင်္ကျားအတွက် ပုဆိုးလေး တကွင်းလောက်လည်း ဝယ်ပေးအုံးမှပါ။ ကိုယ်တွေ ဘဝက သေဌေးဖြစ် ထိုးနိူင်တာမှ မဟုတ်တာပဲလေ... တွေးရင်းက လက်ဖက်ရည်ကို စိန်ပြေနပြေ သောက်ရင်း အချိန်ကို စောင့်လေသည်။
ဟဲ့ ညည်းက နာမည် ဘယ်သူ
မညွန့် ပါ အဘ
အေး လာခဲ့ ဒီရှေ့နား
ဒီ အမျိုးသမီးက မျက်နှာသစ်၊ အဘဆီ လာတာ ဒါနဲ့မှ နှစ်ခေါက်မြောက်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်က အချီကြီး မိသွားတယ် ဆိုလားပဲ။ အဘက မညွန့်ရဲ့ နားရွက်နောက် ထဲ အမွှေးတိုင် တတိုင် ထိုးညှပ်ပေးလိုက်ရင်း လက်ထဲကိုလည်း သီးမွှေးတလုံး ထည့်ပေးလိုက်လေသည်။ မခင်စိန်တို့လည်း အဘ လုပ်သမျှ၊ ပြောသမျှ မျက်တောင်မခတ်၊ အသက်ပင် မရှူနိူင်ပဲ လိုက်ကြည့်မှတ်နေကြ ရလေသည်။
၈ပါး ပါ အဘ
အေးအေး ဟုတ်ပြီ ပြန်ကြ ပြန်ကြ ဒီနေ့ ဒါပဲ
အဘက ပြန်ကြဆိုသော်လည်း သူတို့ မပြန်နိူင်ကြသေး။ အောက်ထပ် ခြံဝန်းထဲ ရုံးစု ရုံးစုနှင့် ခေါင်းချင်းဆိုင်ကာ ယူလာခဲ့သမျှ ချိုင်းပေါင်းစုံ၊ တွက်နည်းပေါင်းစုံ နှင့် အဘပြောသွားခဲ့ တာတွေ တိုက်ကြည့်ရင်း နံပါတ် တွက်ကြလေသည်။
မဂ္ဂင် ဆိုတော့ မက ၅၊ ဂငယ်က ၂ ဆိုတော့ ပေါင်းရင် ၇ ထွက်တယ် ၈ပါးကတော့ ၈က ၈၊ ပါးက ၅ ဆိုတော့ ၁၃၊ ကျမ အထင် နှစ်လုံးပေါင်း ၁၃ ထွက်မယ် ထင်တာပဲ
ဟဲ့ အမွှေးတိုင်နော် အမွှေးတိုင်...အဘ အမွှေးတိုင်သုံးရင် ၇ အမြဲထွက်တယ်
ဒါဆို သီးမွှေးကရော ၆၊ ၅ နော် ပေါင်း ၁၁ ဆိုတော့ ၂ ၊ ပါဝါချိန်းရင် ၇ ပဲလေ
တောင်ပေါ်ချိုင်းအရ ၅ ကောင်းနေတယ်နော် တွေ့လား မြောင်းမြမြို့ တွင် မိုးများမည် တဲ့
ဟုတ်ပြီ ရော့ မယု တို့အုပ်စုက တယောက် ၂သိန်းခွဲဖိုးစီပဲ ၄ဦးစပ် ဆယ်သိန်းဖိုး
မခင်စိန်ဖြင့် ၁၀သိန်းရှိရင် မထိုးတော့ပေါင်၊ အိမ်ရှေ့ အခြောက်အခြမ်းဆိုင် လေးပဲ တဲထိုးရောင်းတော့မယ်...အတွေးနဲ့ မချိပြုံးလေး ပြုံးရင်း အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ကာ ကားကြီးဂိတ်ဘက် လမ်းလျောက်ရင်း ထွက်လာမိတော့သည်။
အဘ ကျနော်က ဘယ်ဂဏန်းကို ပိတ်ရမလဲ ခင်ဗျာ
ဦးတင့်ဇော် ခင်ဗျား ငါးဟင်းကြိုက်သလားဗျ
အေး မကြိုက်ရင် မဝယ်နဲ့ပေါ့ကွ
ဟုတ်ကဲ့ပါ အဘ ဒါ အဘအတွက် ကန်တော့တာပါ
အားလုံးပြန်ကြမှ ဦးတင့်ဇော်က အဘနားကပ်ကာ စာအိတ်ထူထူ တလုံးကို ကန်တော့ရင်း ပိတ်ဂဏန်းကို မေးရသည်။ ဒီလိုပါပဲလေ အဘလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး တွေကတော့ ထိုးသားနဲ့ ဒိုင်အကြား တလှည့်စီ ပေးစားရင်း နှစ်ဘက်လုံး မနာစေရအောင် သတိနှင့် ဟောပြောကြ ရသည်သာ။ ငါးဆိုတာက ၅ပဲ ဖြစ်နိူင် သလို၊ ငါးက တင်္နလာနံမို့ ၂ လည်း ဖြစ်နိူင်သည်လေ။
ဒီလောက်ဆို ဦးတင့်ဇော်တို့က သိပြီ၊ ၂ နဲ့ ၅ အထိုင်ကွက်တွေ ဆွဲ ပိတ်ချရုံပင်။ သောင်းကွက်၊ သိန်းကွက်တွေကို အကုန် ပိတ်ပြီး ဆယ်ကွက်၊ ရာကွက် လောက်ပဲ ဖွင့်ပေးမည်။ ဒီလိုပဲ ဦးတင့်ဇော်တို့လို ဒိုင်ကြီးတွေက ဖောက်သည်လည်း မပျက်၊ ပေါက်တယ် ဆိုတဲ့ နာမည်လည်း ရအောင် လျော်နိူင်သမျှ ငွေကြေးပမာဏ နှင့် တွက်ချက် ကစားရလေသည်။
ကျောင်း တကျောင်းလုံးမှာ သူနှင့် အဘ နှစ်ယောက်ထဲကျန်မှ မောင်ရွှေ ခြံတံခါး ပိတ်ပြီး အပေါ်ထပ် တက်ခဲ့သည်။ ဂဏန်း အထွက်မှာ ဘယ်သူတွေ သေဌေး ဖြစ်လို့၊ ဘယ်သူတွေဖြင့် အိမ်ပေါ်က ဆင်းပေးရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုးများ မောင်ရွှေတို့ အတွက် ရိုးလွန်းလှပြီ။
ဂဏန်းထိုးကြသူများတွင် ချမ်းသာလွန်း၍ အပျင်းပြေ ဝါသနာအရ ထိုးသူတွေ ရှိသလို၊ လောဘမကြီးပဲ မှန်မှန်လေး စားလောက်ရုံ ထိုးနေသူတွေလည်း ရှိကြသည်။ ဘဝတခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ ရည်ရွယ်၍ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားကာ အပိုင်ကွက်ဟု တွက်ပြီး ပုံအော ထိုးနေသူများလည်း ရှိလေသည်။ ဒီကြားထဲမှာမှ မယုတို့လို ပါးနပ်သော ကော်မရှင်စား များလည်း ရှိသေးသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ မသေချာလှသော ဂဏန်းကလေး နှစ်လုံး အပေါ် မိမိ ဘဝ တခုလုံး ပုံလောင်းဖို့ ဆိုတာကတော့ အင်မတန်မှ မိုက်မဲလွန်းလှသည်။
ထိုးသားပဲပေါက်ပေါက်၊ ဒိုင်ပဲစားစား ဂဏန်းထွက်ပြီးလို့ စို့စို့ပို့ပို့လေး စားရသူ တိုင်းဆီက မုန့်ဖိုး ပဲဖိုးလေး လက်ဖြန့်စရာမလိုပဲ သူ ရနေကျ။ မယုတို့လို ငါးကြင်းကြော်နေဖို့တောင် မလို၊ သူများကြော်ပြီးသား မျှစားရုံ...။ မောင်ရွှေက ပါးနပ်သည်။ လည်ပတ်သည်။ အားလုံးနှင့် တည့်အောင် ပေါင်းသည်။ ဘယ်သူတွေ ခေါင်းမသုံးလို့ ဘယ်လိုပဲ မွဲဆေးဖော်ဖော် သူကတော့ အချိန်တန် လက်ထဲ ငွေစီ နေသည်သာ။
သူတို့ အားလုံးကို ကြည့်ရင်း မောင်ရွှေ သနားလှသည်။ မောင်ရွှေ့ ဒဿနက လောကကြီးမှာ အသက်ရှင်နေစဉ် နေတတ် စားတတ်ဖို့ သာ လိုသည် ဟူ၏။
မိုး စုန်းစုန်းချုပ်နေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်များစွာ
"ခြေကားယား လက်ကားယားနဲ့ ဟစ်ဟော့ တပုဒ် အော်သွားတဲ့ လူငယ်တသိုက်၊ ဘုံဆိုင်အထွက် အိမ်အပြန် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချ ခြေလှမ်းယိုင်နဲ့နဲ့ အမူးသမား တယောက်၊ မီးတိုင်အို မှောင်မှောင်အောက်က ဈေးခေါ်နေတဲ့ ညဉ့်ငှက်လေးတွေ၊ တချက်တချက် အတင်း ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ တက္ကစီပေါ်က ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်မောသံတွေ..."
ဟိုး…. မြို့သစ် ချောင်ကြားက အိမ်စုတ်လေးထဲက ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ စာကျက်နေတဲ့ ကလေးငယ်၊ ဘေးနားက ချဲတွက်နေတဲ့ သူ့အမေ၊ သူ့အဖေက မျက်ထောင့်နီနီ တိုင်နံရံမှာ မှီလို့ အမူးမပြေ့တပြေနဲ့ သူ့သားလေးကို ခြင်ဟပ်လို့ ယပ်ခတ်ပေးရင်း သူ့သား စာကျက်သံကို ဇရက်မင်း စည်းစိမ်ယူရင်း စောင်းငမ်းငမ်းနဲ့ နားစွင့်နေတယ်။
ခွေးတွေကလဲ ဟောင်လိုက်တာ။ မနေ့တုန်းက သူတို့ အိမ်မျက်စောင်းထိုး အပေါင်ဆိုင်ကို သူခိုး ၀င်ခိုးတုန်း ကတော့ ဒီသောက်ခွေးက မဟောင် ဒီနေ့မှ ဘာကြောင့် ဟောင်နေပါလိမ့် အော်အော် သူ့အမ အလုပ်က ပြန်လာပြီပဲ။ ညဉ့်တောင် နက်ရော့မယ်။ အခုမှ သူ့ စင်တင်တေးဂီတ ဆိုင်က ပြီးတယ်ဆိုလား? မောင်လေးရေ ရော့ ရော့ မုန့်ဖိုး .. စာသေချာ ကျက်နော် ... မမ အိပ်ချင်ပြီကွယ် အမေရေ အဖေ့ကို တွဲတင်ရအောင် တိုင်ထောင့်မှာ ခွေခွေလဲနေတာ အအေး ပတ်တော့မယ် .. ၀ုတ် ၀ုတ် အူ....အူ......ဝု.....ဝူး.....
သူတို့တွေဟာ ဒီနေ့ကို ဖြတ်ခဲ့ကြပြီ။ မနက်ဖြန်ရော ဘယ်လို ဖြတ်ရအုန်း မှာပါလိမ့်၊ သူတို့အတွက် ဒီမြေ ဒီရေ ဒီရေဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ တမ်းတခြင်းတွေ အိမ်မက်လှလှတွေ ပေါ်စေရဲ့လား။ သူတို့အတွက် ဒီနေ့ဟာ မနက်ဖြန်အတွက် ရောင်ခြည်ဦးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရဲ့လား? သူတို့အတွက် နောက်နေ့ဆိုတာ ရေရာ သေချာစွာနဲ့ ကောင်းခြင်းတွေ ဝေဖြာနေပါရဲ့လား? ဟင့်အင်း! လို့ အမှန်အတိုင်း ငါဖြေရင် သံတိုင်တွေ ငေါက်ကနဲ့ ခေါ်သံတွေ ကြားရမယ်။ အင်းလို့ ငါဖြေရင် ငါ့သမိုင်းတွေ အဆိပ်သင့်တော့မယ်။ အော် ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိတဲ့ မနက်ဖြန်များ အကြောင်းကို နေ့စဉ် မွန်းကြပ်မှုတွေ ခါးသီးမှုတွေကို မြိုမြိုချနေရလို့ တနေ့တော့ ဖြစ်လာမှာပါ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဘဝတွေ ခေါက်ရိုးများကို ကျိုးလို့။
မနေ့ ကလေ … မနေ့ကပေါ့ ........ မနေ့က ဆိုတာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကို ဆိုလိုတာပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်နော် ။ တော်ကြာ သတင်းစာထဲက မီးတွေလာ တိုင်းပြည်ကသာ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ငါတွေ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလို အပ်ချမတ်ချ မဟုတ်ပဲ တလွဲစီဖြစ်နေတော့ မယုံမရဲ ဖြစ်မစိုးလို့ အဲ့ …. မနေ့ညကလေ ငါတို့မိသားစု အိပ်ရာဝင်မလို့ မီးခလုတ်တွေကို ဓါတ်မီးမှိန်မှိန်နဲ့ လိုက်ပိတ်နေတုန်း အိမ်ရှေ့က လူသံတွေ အုပ်အုပ်အက်အက်နဲ့ စကြားလာခဲ့တယ်။ မီးပျက်နေတာက နေ့ခင်း ကတည်းကပါ။ မီးပြန်လာချိန်သိရအောင် ဆိုပြီး အိမ်မီးလိုင်းကို ဖွင့်ထားတော့ ညပိုင်း အိပ်ချိန်မှာ မီးအကယ်လို့ လာနေရင် လင်းနေ မှာစိုးလို့ ဓါတ်မီးအလင်းလေးနဲ့ လိုက်ပိတ်နေတုန်း ကြားခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအသံတွေဟာ သုသာန် တစပြင်လို တိတ်ဆိတ်နေပြီး တခါတခါ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ ကားသံကြားမှ အသက်ဝင်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ထူးဆန်းနေတာပေါ့။
“ မအေ--ိုး။ ခွေးသူခိုး။ သေဖို့သာပြင်” ခွပ် ဖေါင်းဖေါင်း... ချ .. ချ အသေသတ်ပစ်.. မအေ--ိုး ကိုယ်မေကို--ိုး” ကျမ်းကိုးကားပြီး ဆဲသလို စုံစေ့လှတဲ့ ဆဲသံတွေနဲ့ အတူ “အမလေး သေပါပြီဗျ.. ကျနော် မလုပ်ပါဘူး။ အား .. အား.. ခွပ်.”
မနေနိုင်တဲ့ ငါလဲ အိမ်တံခါးသော့ဖွင့်ပြီး ခြံဝင်းထဲပြေးထွက်ပြီး ခြံစည်းရိုးကနေ ကြည့်လိုက်တော့ တဘက်က အိမ်ရှေ့မှာ အင်ဗာတာ နဲ့ ထွန်းထားတဲ့ ဓါတ်တိုင် မီးချောင်းအောက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ထင်းထင်း လှမ်းမြင်ရတော့ တာပဲ................။
အကျီမပါတဲ့ လူနှစ်ယောက်( လူငယ်သာသာပါပဲ ရှိလှပေါ့ ၂၀ ) နဲ့ အင်္ကျီဖြူ ညစ်နွမ်းနွမ်း ပုဆိုးခပ်တိုတို ၀တ်ထားတဲ့ လူတယောက် ပေါင်းသုံးယောက် က အခြား လူငယ်တယောက်ကို ၀ိုင်းပြီး ကန်ကျောက်ရိုက်ထိုးနဲ့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတယ်။ ခံနေရတဲ့ လူငယ်က လက်မောင်းပလွေရိုး... ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်.... ခါးပတ်က သံဖြူပြားတွေနဲ့ အလှစီထားတဲ့ ခေတ်ပေါ်လူငယ်တွေ စတိုင်လ်နဲ့ အပေါ်က အကျီင်္လက်ပြတ် စုတ်စုတ်တထည်ကို ၀တ်ထားပြီး သူ့ခါးမှာ လျော့ရဲရဲနဲ့ အပေါ်အကျီဖြူကို ချည်သိုင်းထားတယ် လက်မောင်းမှာလည်း တက်တူးခေါ်တဲ့ အရုပ်တချို့ ထိုးထားတယ် ထင်တာပဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့ သုံးယောက် တယောက် ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်နေတာကို အဲဒီတဖက်အိမ်က လူတွေက ထွက်တောင်မကြည့်ဘူး။ အိမ်ထဲကပဲ ချောင်းနေထင်ရဲ့။
ဆဲဆဲဆိုဆို ထိုးထိုးကန်ကန်နဲ့ အကျီဖြူဝတ်ထားတဲ့ ကောင်က ဦးဆောင်ပြီး အဲဒီ ဟစ်ဟော့ ကောင်လေး တယောက်ကို ချနေတာ။ ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်ကန်လိုက် ခံရတဲ့ ကောင်က အား! အမေ့ အမလေး… သေပါပြီဗျ!... မလုပ်ပါနဲ့ဗျ!... ကူကြပါအုံးဗျ ...! အော်လိုက် ။ ဟိုတဘက်က ကောင်က အုတ်ခဲ နဲ့ ပုခုံး လို့ထင်တာပဲ ဦးခေါင်းကို ထုတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ထုလိုက် ခြေထောက်နဲ့ ဆောင့်ကန်လိုက်။ ယိုင်လဲခွေပြော့ နောက်လန်သွားတာကို ပြေးကန်လိုက်နဲ့ ငါ့မျက်စိထဲမြင်နေတာ။ စိတ်ထဲမတော့ တီဗွီက ပြပြတတ်တဲ့ Discovery ထဲက တိရိစ္တာန်တွေ ခြင်္သေ့တွေက သမင်တွေ သားကောင်တွေကို ၀ိုင်းပြီး အမဲဖျက်တာ သတ်ကြ ရက်စက်ကြတာ မြင်ယောင်နေမိတယ်။
စာဖတ်သူက ပြောမယ် မင်းဘာလို့ ထွက်မဆွဲသလဲလို့ အဲလို လူတယောက်ကို လူအများက မတရား အနိုင်ကျင့်နေတာကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေသလားလို့။ ဟုတ်တယ် ငါလည်း ထွက်ဆွဲမလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အိမ်က မိဘတွေက ငါ့ကိုဆွဲ မထွက်နဲ့မထွက်နဲ့လို့ ခပ်အုပ်အုပ်ပြောတယ်၊ မတော်လို့ အခု အရိုက်ခံနေရတဲ့ ဆေးဘဲလိုလို ပိန်ပိန်ကောင်က မနေ့ကမှ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံဖို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့ ထောင်က လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ သူခိုးဂျပိုးဖြစ်နေရင် ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ! တဲ့ ဒီကောင် တခုခု ၀င်ခိုးလို့ သူ့ကို ၀ိုင်းဆုံးမ နေတာလားမှ မသိတာတဲ့… ဟုတ်မှာ …ဟုတ်မှာ .. စိတ်ထဲမတော့ အသိချပ်နေလေရဲ့။
ဟုတ်ပါ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မှောင်နေတာပဲ ။ အဲဒီအိမ် သူတို့ ရန်ဖြစ် ရိုက်နှက်နေတဲ့ အိမ်ရှေ့တခုပဲ ဓါတ်မီးတိုင်တခု ထွန်းပေးထားလို့ လင်းနေတော့ ပွဲကြည့်စင်ကနေ ကြိုးဝိုင်း လင်းလင်းထဲက လက်ဝှေ့ပွဲကို ကြည့်သလို မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းဆိုးဆိုးဟာ ၅ မိနစ်လောက် လုပ်ချင်သလို လုပ်ပြီး ခွေခွေလေးနဲ့ ငါ့တဘက်အိမ် ခြံတံခါး သံပန်းကို မှီလဲနေတဲ့ ဘိန်းစားလိုလို ဆေးခြောက်သမားလိုလို ကောင်ကို ဟိုသုံးယောက် အနက်က အကျီဖြူနဲ့ ကောင်က အုတ်ခဲနဲ့ အားရပါးရ ပစ်ပေါက်ပြီး မိုးမွန်တဲ့ အဆဲသံတွေပြော ထွက်သွားတော့တယ်။ ငါလဲ အိမ်ထဲကကို မထွက်ဖြစ်သေးဘူး၊ စိတ်ထဲ မတော့ တယောက်နဲ့ အများမို့ သနားလို့ မဆုံးသေးဖူး။
စောစောကတော့ သနားစဖွယ် အသံနဲ့ အသံကုန်အောင်နေတဲ့ ကောင်.... သေပါပြီဗျ! ကျနော် မခိုးပါဘူးဗျ! ကယ်ကြပါအုံးဗျ .. ! အောင်မလေး! အား … အား စတဲ့ စကားလုံးပေါင်းများစွာနဲ့ အသံနက်ကြီးတွေနဲ့ အော်ဟစ်နေတဲ့ အထိုးရိုက်ခံလူငယ်ဟာ ..... ဓါတ်မီးတိုင်အောက် ခြံစည်းရိုးဘေးကနေ သူမဟုတ်သလိုပဲ ကုန်းထပြီး ဟိုကြည့် သည်ကြည့်နဲ့ ထွက်သွားပါလေရော အလင်းရောင် သိပ်မရလို့ သူ့မှာ သွေးတွေ ထွက်နေမနေ မသေချာပါဘူး။ ကောင်းကောင်း မမြင်လိုက်ပါဘူး လက်မောင်းပုလွေရိုးနဲ့ ခပ်ပိန်ပိန် ဆေးခြောက်သမားလို အဲဒီကောင်ဟာ လက်စသတ်တော့ ကျနော်တို့ အိမ် သုံးလေးအိမ်ကျော်လောက် အသုဘအိမ် ဖဲဝိုင်းက ထ လာတာကိုး … သူဟာ မူးလဲ မူးနေပုံရတယ်။ သူ့ပုံကြည့်ရတာ မူးယစ်ဆေးဝါးလဲ သုံးခဲ့ပုံရတယ်။ ယိုင်တိယိုင်ထိုးနဲ့ လမ်းလျှောက်နေပုံက ဒါဏ်ရာတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ သူ့ကို သူ့အဖေါ်တချို့က တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ထွက်လာမေးပုံကို အသုဘအိမ်ရှေ့ မီးရောင်မှိန်မှိန်နဲ့ လှမ်းမြင်ရပြန်ပါရော။
အဲ... မကြာပါဘူး။ စောစောက ကောင် ငမူး၊ ငကြောင် ထွက်သွားရာ ဘက်ကနေ အော်သံတွေ ကြားရပြန်ပါရော.. ဟေ့ကောင်တွေ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ငါ့ကို မလုပ်နဲ့ ဟေ့ကောင်တွေ ဟေ့ကောင်တွေ ဆိုပြီး ပြေးလွှားလာတဲ့ အသံတွေ ကြားရပြန်ရော။ ငါလည်း ခြံတိုင်တွင်းထဲက အမှောင်ထုကို အကာကွယ်ယူပြီး ဆက်စောင့်ကြည့်နေမိတယ်။ တဘက်အိမ်မီးတိုင် အလင်းနဲ့တင် မြင်နေရပါပြီ။ စောစောက မူးကြောင်ကြောင်ကောင်ကို တဖက်သတ် ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးလို့ ထင်ရတဲ့ အကျီဖြူ ပုဆိုးနဲ့ကောင်က ရှေ့ကထွက်ပြေးလာတယ် သူ ၀ဋ်လည်ပြီထင်တယ်။ စောစောကတော့ သူက တခြား လူတယောက်ကို သေလုမျောပါးဖြစ်အောင် ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ကန်ကျောက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူခံရတဲ့ အလှည့်ပေါ့ ။
လူ့လောကကြီးက သံဝေဂ ရစရာပဲ။ မုဆိုးဖြစ်လိုက် သားကောင်ဖြစ်လိုက်နဲ့လေ...... ၀ရုန်းသုန်းကား ပြေးနေတဲ့ သူ့နောက်က အကျီမပါ ပုဆိုးကို ပေါင်ပေါ်လောက်ထိ တိုအောင်ဝတ်ထားတဲ့ လူသုံးယောက်က အမဲဖျက်မလို အားကုန် ပြေးလိုက်လာတယ် သူတို့လက်ထဲမှာလဲ ပျဉ်ချောင်းကြီးတွေ ဒုတ်တွေနဲ့ .. တရကြမ်းပြေးလိုက်ရင်း ရှေ့ကကောင်ကို မှီတာနဲ့ မှီတဲ့ နေရာ ကျောကုန်းတို့ ဦးခေါင်းတို့ကို အားကုန်လွဲပြီး လှမ်းရိုက်နေတယ် တခွပ်ခွပ် တဖေါင်းဖေါင်းပဲ ရှေ့ကကောင်ကလည်း ပြေးရင်းအော် အော်ရင်းပြေး ငါမြင်လိုက်ရတာက မီးတိုင် အလင်းမှိန်ပျပျအောက်က အသက်လုထွက်ပြေးတဲ့ ရှေကကောင်နဲ့ ဘီလူးသဘက်စီး သလို သတ်မယ်ဖြတ်မယ့် ပုံနဲ့ ပြေးလိုက်ရိုက်နှက်နေတဲ့ သူတို့ သုံးယောက်ကို ဖြတ်ကနဲပဲ မြင်လိုက်တာ ။
အသံတွေကတော့ ဆက်ကြားနေတုန်းပဲ အသံနက်ကြီးနဲ့ အော်ပြေးသူက ပြေး ညာသံပေးပြီး လိုက်ရိုက်သူက ရိုက်..... အူး ဟူးဟူး ….. ငါက သူတို့ဆီက အသံ အကြားနဲ့တင် မောနေပြီ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီလဲ။ ငါတို့တိုင်းပြည် ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ........... သူတို့ ဘယ်ထိ လိုက်ရိုက်နေလဲမသိ ငါလည်း မမြင်နိုင်တော့ပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်တချို့ ကနေ ဓါတ်မီးရောင် အလင်းတချို့ အမှောင်ထု လမ်းမပေါ်ကို ဝေ့၀ဲထွက်လာတယ် စူးစမ်းတဲ့သဘော ငါတို့အိမ်က မအိပ်သေးဘူး ပြဿနာ လာရှာမယ် စိတ်မကူးနဲ့ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ အရိပ်အယောင် ပြတဲ့ သဘောထင်ပါရဲ့ အိမ်ပြင်တော့ ဘယ်သူမှ ထွက်မကြည့်ကြဘူး ငါလည်း ထွက်မလိုက်ရဲဘူး သူတို့က ဘီလူးစီး သရဲစီး ဖြစ်နေကြပုံတွေ ........ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေမှန်းလဲ ကိုယ်မသိ။ မနေ့ကတင် ထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ တေလေဂျပိုး လက်ယဉ်နေတဲ့ လူသတ်သမားတွေ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.... ငါ့အမေပြောသလို အချင်းချင်း ကျောင်းတော်က ရန်စ ကို အပြင်ရောက်မှ ဖေါက်ရှင်း ရှင်းနေတာဆိုရင် ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ? ပဲလှော်ကြား ငါ ဆားညှပ် သွားမှာပေါ့။
အင်း ..... ပြီးတော့
သတင်းစာထဲ မီးလာသလောက် အပြင်မှာက တစပြင်လို မဲမှောင် ငြိမ်သက် နေလေရဲ့ ... ရန်ကုန်မြို့သစ် အိပ်ပြီ ထင်တယ်။
အော် ငါ့နာရီကို ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ည ဆယ်နာရီနဲ့ ဆယ့်ငါးမိနစ်ပဲ ရှိပါသေးလား။ သိပ်ညဉ့်အနက်ကြီး မဟုတ်သေးဘဲကိုး ။ ငါတို့ နိုင်ငံ ငါတို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ဘာတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်? သူတို့ ပြောနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်း သာယာနေပါတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့လား? တကယ်လား? နွေနေ တံလျှပ်တွေလား? ဒီနေ့တွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ မနက်ဖြန်များထဲမှာ မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရုပ်ဆိုး ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဟာ ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံး နွားရိုင်းသွင်းချိန်ရဲ့ တကယ့် နိစ္စဓူဝ ဇာတ်ရုပ်တွေပဲလား?
ကြေကွဲခြင်း မွဲတဲ့ မိုးတိမ်အောက်မှာ
ဆွံ့အ ရင်း ဆွံ့အ နေရတာဟာ …..
အကြောက်တရားတွေနဲ့ ဖိစီးထားတဲ့ စစ်ဖိနပ်တွေအောက်မှာ မိုးစုံးစုံး ချုပ်နေလို့ပဲ မဟုတ်ပါလား ။
Valentine's Day Comments by Crazyprofile.com
Valentine's Day ....ဆိုတာကျွန်တောင့်္ အတွက်တော့ဘယ်လိုမှ မပတ်သတ်တဲ့တစိမ်းတရံနေ့ လေးပါ...
အဲဒီနေ့ လေး ကျွန်တော်အတွက်အသက်ဝင်ဖို့ အတွက်တော့ ....အချစ်နတ်သာလေးကို နှလုံးသာတခုပူဇော်လိုက်အုံးမယ်......
လေဝင် လေထွက် ဆိုလို့ ventilator မှထွက်သည့် လေသာ ရှိသည့် သင်္ဘောဝမ်းထဲ၌ တဖြန်းဖြန်း ပွင့်ထွက်နေတဲ့ မီးပွားတွေ ကြားမှာ ကျင့်သားရနေတဲ့ မျက်လုံးက ကန်းသွားမှာကို မကြောက်တော့ လောက်အောင် အလုပ် အပေါ် အာရုံစိုက် နေမိသည်။
ထို့အပြင် တကိုယ်လုံးရှိ ချွေးတွေကလည်း အက်ျ်ီတထည်လုံး ရေတွေ စွတ်ထားသလို စိုရွှဲလို့ နေ၏။ ဒီနေ့အတွက် နေ့တွက်စာ အပြင် အချိန်ပိုလေးပါ ဆင်းခွင့်ရဖို့ foreman တွေမြင်အောင် တနေကုန် ကြိုးစား လုပ်ပြခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့ ယခုလုပ်တဲ့ သင်္ဘော ဆီတိုင်ကီ ဝန်းကျင်နားတွင် safety အပြည့်ရှိသော်လည်း လုပ်ရဲသူက ရှား၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျနော့်အား အချိန်ပို ဆင်းခွင့် ပေးသည်လား မသိ။
ကျနော့် အနေနဲ့က တနေ့ကို အလုပ်ချိန် ၂၄နာရီ ဆိုလျှင်လည်း လုပ်ဖို့ အသင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျနော် ဒီကိုရောက်လာဖို့ အမေက ကျနော်တို့ မိသားစုအိမ်လေးကို ပေါင်နှံလို့ လွှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အမေ ကတော့ သိပ်လွှတ်ချင်လို့ရယ် မဟုတ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ် လုပ်ချင်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဲဒီက ပြန်လာကြတဲ့ ကိုရွှေဗမာများက သူတို့သည် ထိုနိုင်ငံတွင် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ငွေရှာလို့ သူဌေးတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင့် အာဘောင်အာရင်း သန်သန် ပြောပြတတ်ကြသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်သမားခေါ်တဲ့ အေးဂျင့်တွေ ကလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ် လုပ်ရတာ လူသက်သာသလို အခွင့်အရေးလည်း အများကြီး ရနိုင်ကြောင်း ရွှန်းရွှန်းဝေ ပြောခဲ့ကြသည်။
အခုတော့ သူတို့စကားတွေ ဟုတ် မဟုတ်ဆိုသည်မှာ ကျနော့ ကိုယ်တွေ့တွေက သက်သေပြ နေပေပြီ။ မြန်မာဟေ့! ဆိုလျှင် ကြည့်သောမျက်လုံးများက အရောင်တမျိုး ဖြစ်နေတတ်သည်။ မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်သည့် အကြောင်းတွေ ပြောနေလျှင်တော့ များလှချေသည်။ ဒါတွေအားလုံးကို အောင့်အီး သည်းခံကာ ကျနော်တို့ အိမ်လေးကို ပြန်ရွေးနိုင်ရန် ကျနော် အစွမ်းကုန် အလုပ် လုပ်ဖို့သာ လိုအပ်နေသည်။
Alarm သံ မြည်လာပြီးနောက် အချိန်ပို အလုပ်ချိန် စေ့သောအခါ အနားတွင် အသင့်ချထားသော ရေဗူးကိုယူ၍ ရေတဝ သောက်ချလိုက်သည်။ တနေကုန် တနေခန်း အပူထဲတွင် အလုပ် လုပ်ရသောကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်းသို့ ရေထည့်လိုက်သည့် အခါတိုင်း လူမှာ အငွေ့တွေပင် ပျံတက်သွားသလို ခံစားရ၏။ ရေတော့ ကျနော် ကြိုးစားသောက်မှ ဖြစ်မည်။ နို့မို့ မိမိ အရည်ပြားတွေအပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ကလီစာတွေပါ မီးကင်ထားသလို ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ဒီလို အလုပ်ကြမ်းတွေ မို့လို့လည်း နိုင်ငံခြားသား များကိုသာ ခေါ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အလုံပိတ်ထားသော သင်္ဘော အခန်းတွေ ထဲတွင် ဝရိန်ငွေ့ တွေကိုသာ ရှူရှိုက်လို့ အသက်ရှင်နေသည့် ဘဝနှင့် ပြန်ရမယ့် အခကြေးငွေက နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် မဆို စလောက်သာ။ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၇၅၀ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဝင်ငွေနဲ့ ပြန်တွက်ကြည့်လျှင်တော့ စိတ်ကူးယဉ်စရာ ကောင်းသလို လိုပင်။ တကယ်တမ်း မှာတော့ အခွန်ဆောင်ရတာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်နုတ်လိုက်လျှင် ကျန်တဲ့ငွေက စားတာသောက်တာ၊ လမ်းစရိတ် တို့နှင့် အိမ်ကိုတောင် အနိုင်နိုင် ပို့နေရသည့် အခြေအနေ။
မိမိအလုပ် ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းနေရင်း တဖက် အခန်းထဲတွင် အလုပ် လုပ်နေရာမှ ထွက်လာသော ကိုအောင်ကြီးကို လှမ်း နှုတ်ဆက် လိုက်သည်။
ဆရာအောင်လည်း ဒီနေ့ OT ပဲကိုး
ဟုတ်တယ်ဟေ့.. ငါလည်း အသေဖြဲနေရတယ်
ကြည့်လုပ်ဆရာ… ဘော်ဒီကိုလည်း ပြန်ကာအုံးနော်
မတတ်နိုင်တော့ဘူးကွာ.. ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် အိမ်စရိတ်အတွက်က မလွယ်ဘူး။ အငယ်ကောင်လေးက ဒီနှစ် ကျောင်းစထား ရတော့မှာလေ
ဟူးးးး ကနဲသာ သက်ပြင်းချ မိတော့သည်။ ပြောမယ့်သာ ပြောနေတာ ကိုအောင်ကြီး အလုပ်က ကျနော့ အလုပ်ထက် ကျန်းမာရေးကို ပိုထိခိုက်စေသည် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကရော သူနဲ့ သိပ်မခြား လှပေ။ ကျနော်က MIG ဟုခေါ်သော ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ အသုံးပြုပြီး လုပ်ရသော ဝရိန် အမျိုးအစား။ ကိုအောင်ကြီးက ကာဗွန်ချောင်းတွေကို ရှောခ့်ရိုက်လို့ သံထည်တွေကို လိုသလို စားထုတ်ရသော Gauging သမားတယောက်။ သူ အလုပ် လုပ်ပြီဆိုလျှင် လေထဲတွင် ကာဗွန်စတွေ ပျံ့နှံ့နေသည်။ mask တွေ ဘယ်လိုပဲခံခံ အလုပ်သိမ်းလို့ နှာခေါင်းကို နှိုက်ကြည့်လျှင် ကာဗွန်ကြပ်ခိုးနှင့် မဲမဲအရာများ မြင် မကောင်းအောင် ထွက်လာတတ်သည်။ ဝရိန်မီးကို ကျင့်သားရပြီး ဖြစ်တာတောင် ရံဖန်ရံခါ မျက်လုံးထဲက မျက်ရည်ပူများ အဆက်မပြတ် ကျတတ်လို့ အလုပ် မဆင်းနိုင်သည်အထိ ဖြစ်ရသည်။ အလုပ် စဝင်ခါစကတော့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို ကြုံလိုက် ရတဲ့အခါ ဆက် မလုပ်တော့ပဲ အိမ်ပြန်ပြေးရင် ကောင်းမလား စိတ်ကူးမိသေးသည်။ နောက်.. ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိမို့ ဇွတ်တိုး ဆက်လုပ်ခဲ့ရသည်။
တွေးရင်းနဲ့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး Time Card ရိုက်ကာ အလုပ်မှ စီစဉ်ပေးသော ကားဖြင့် အဆောင်သို့ ပြန်ခဲ့သည်။ ထို ဖယ်ရီကားပေါ် ခုန်တက်တဲ့ အခါတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ ဝက်တင်တဲ့ ကားကြီးတွေကိုသာ ပြေး သတိရတတ်သည်။ ဝက်တွေ ကိုတော့ သတ်ဖို့တင်သည်။ ကျနော်တို့ ကိုတော့ ဝအောင် တန်အောင်ခိုင်းဖို့ တင်သည်။ အသတ်ခံ ရတာ ထက်စာရင် တော်သေးသည်ဟု ဖြေတွေး တွေးရ မလိုလို။
ကားပေါ်တွင်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွေ အိန္ဒိယ ကုလားတွေနှင့် အပြည့် ဖြစ်သည်။ သူတို့ကလည်း ကျနော်တို့နဲ့မခြား ဇာတ်တူသားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ ကျွန်ချင်းတူတူ နည်းနည်း သာတယ် ပြောရမည်။ ကျနော်တို့ မရောက်ခင် ကတည်းက ဒီမှာ ကျွန်လာခံနေတော့ ကျွန်လောကတွင် နေရာကောင်း ရနေသော ကျွန်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုရောက်နှင့်သော ကျွန်များထဲတွင် ဘင်္ဂလား ကျွန်များက သဘောထား ဆိုးကြသည်။ ဒင်းတို့က ဘယ်တုန်းတည်းက ဗမာဆိုလျှင် ကြည့်မရသည် မသိ။ အခွင့်ကြုံတိုင်း ဖိနှိပ်ခိုင်း၍ သူဌေး ကျေနပ်အောင် ဖေါ်လံဖါး လုပ်ပြတတ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ ဘိုးဘေးများ လက်ထက်တုန်းကတော့ ကုလားဆိုတာမျိုးက ချေးကျုံး၊ သေးကျုံး၊ လန်ချားဆွဲ စသဖြင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်လာခံကြရသည်။ ကျနော်တို့ လက်ထက် တွင်မှာတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံသို့ လှည့်လည် ကျွန်ခံ ကြရသည်။ ထိုအဖြစ်ကြောင့် ကျနော့ ခေါင်းထဲတွင် ကံတူလို့ အကျိုးပေးတူကြသော ကျနော်တို့ နိုင်ငံသား လူမျိုးများအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသည်။ ထိုထက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ လက်ငင်း သတင်းတွေကလည်း ရှိသေးသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က သင်္ဘောကျင်း ထဲတွင် ကရင်သူငယ်ချင်း တယောက်သည် ဘင်္ဂလား ကုလားတကောင်အား ထိုးကြိတ်မှုဖြင့် ဂိုဏ်းစတားနှင့် လေဆိပ်အထိ ချက်ခြင်းပို့ကာ ပြည်တော်ပြန်ခွင့် ပြုလိုက်သည်။ ရန်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းမှာ ထို ဘင်္ဂလားက ဖုန်းဇာတ်လမ်းမှ အရင်းပြုပြီး မြန်မာအိမ်ဖော်မလေး တယောက်နှင့် လစဉ် ဟိုတယ်တွင် မီးခွက်မှုတ် စခန်းသွား နေကြောင်း ထိုကရင်အား ပြောပြသည်။ ထိုကရင်လည်း တအံ့တသြဖြင့် ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အောင့်အီး နားထောင်နေရာမှ ထိုမြန်မာ အိမ်ဖော်မရဲ့ နာမည်နှင့် အသက်ကို မေးလိုက်သောအခါ ဒီနိုင်ငံတွင်ပင် အိမ်ဖော် လုပ်နေသော သူ့ ညီမအရင်း၏ နာမည်နှင့် အသက်ပါတူနေသဖြင့် စိုးရိမ်သွားမိသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုကုလားအား အချိုသပ်၍ ပုံရှိလျှင်ပြရန် တောင်းလိုက်သော အခါ ထိုကုလားက သူ့ဖုန်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဟိုတယ်တွင်း ပုံများကို ထိုကရင်အား အားပါးတရ ပြလေတော့သည်။ ထိုကုလားဖြင့် ပျော်မြူးနေသော အနှီး သူငယ်မမှာ ထိုကရင်၏ ညီမ အရင်းခေါက်ခေါက် ဖြစ်နေသည်ကို မြင်ရသောအခါ ကရင်လည်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ထိုကုလားအား နှာခေါင်းရိုး ကျိုးလို့ မျက်စိတဖက်မှ သွေးကျတဲ့အထိ ထိုးလေသည်။ ကံကောင်းသည်မှာ ကုမ္ပဏီက နာမည်ပျက်မည် စိုးသဖြင့် အထိုးခံရတဲ့ ကိုရွှေကုလားကို ကျေနပ်အောင် ငွေပေး၊ ဆေးကုလုပ်ပြီး ကရင်အား စောစောစီးစီး ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ကရင်လည်း ဒီနိုင်ငံတွင် ကြိမ်ဒဏ်သို့မဟုတ် ထောင်အနည်းဆုံး ခြောက်လ ကျနိုင်သည်။ ကျန်ရစ်သော သူ့ညီမကတော့ ဘယ်လိုဆက် စခန်းသွားအုံးမည် မသိနိုင်တော့ပေ။
အဆောင်ရှေ့ ရောက်လို့ ကားရပ်တာနဲ့ ကားပေါ်မှ အပြေးဆင်းကာ အခန်းထဲဝင်လို့ အဝတ်အစားပင် မလဲနိုင်သေးပဲ ညစာအတွက် ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ရသည်။ ကျနော်တို့ ထမင်းဟင်းချက်ရန် အတွက်နေရာက လက်ရှိ အဆောင်ရှိလူနှင့် မလောက်ငှ သဖြင့် ကိုယ်က ဦးအောင်နေရာယူပြီး ချက်ပြုတ်မှ ညစာကို ကိုးနာရီလောက် စားဖြစ်သည်။ ဝက်သား ချက်သော နေ့တွင် မှာတော့ ကိုယ့်မီးဖိုနား မီးဖိုလုရန် ဘယ် ဘင်္ဂလားမှ မကပ်ဝံ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့် သူတို့ မီးဖို လာမလုစေရန် ကိုယ်ကပဲ ဝက်သားနေ့တိုင်း စားရမလို လိုပင်။ စားသောက် ပြီးသောအခါ ဖုန်းမှ သွင်းထားသော သီချင်းလေးများ နားထောင်လို့ မိမိနှင့် အခန်းဖော်လည်းဖြစ်၊ ကုတင်အတူ အိပ်ဖက်လည်းဖြစ်သော ကိုအောင်ကြီးနှင့် နှစ်ဦးပိုင် နန်းတော် နှစ်ထပ် ကုတင်ပေါ်တွင် သူက အပေါ်အထပ်တွင် အိပ်၊ ကျနော်က အောက်အထပ်တွင်အိပ်လို့ မိန့်မိန့်ကြီးစံမြန်းကာ မြန်မာပြည်မှ မိမိတို့၏ ရှေးဟောင်းဖြစ်ရပ်များကို ပြန်လည်တူးစွရင်း အပြန်အလှန်ပြောပြ အလွမ်းဖြေကြရသည်။ ကိုအောင်ကြီး ပြောပြနေကျ အကြောင်းတွေထဲတွင် သူ့သား နှစ်ယောက် အကြောင်းက ညတိုင်း အမုန်း နားထောင် ရသည်။ သူပြောပြ နေတဲ့ အမူအရာနဲ့ လေသံတွေကို နားရည်ဝ လာတော့ ကိုယ်တောင် သူ့နေရာကို ရောက်ပြီး ခံစားရသလိုပင် ဖြစ်မိသည်။
ငါ့သားအကြီးကောင်က အေးတယ်ကွ.. စကားပြောရင် မပွင့်တပွင့်နဲ့.. ရုပ်ကတော့ ငါ့အတိုင်းပဲ လန်းတယ် ပေါ့ကွာ
တော်ပါ ကိုအောင်ကြီးရာ အကိုသား ချောတယ် ပြောချင်ပြောပါ။ အကို့ရုပ်ကြီး လန်းတယ်တော့ ထည့်ပြော မနေပါနဲ့။ ဒီလောက် ဝရိန်အပူတွေ မိနေတဲ့ ဘဲကင်လို အသားအရည်က ဘယ်လိုလုပ် ချောလာတော့မှာလဲ
ကျနော့ စကားကြောင့် ကိုအောင်ကြီးက တဟားဟား ရယ်လို့ အငယ်ကောင် အကြောင်းပါ ဆက်ပြောပြန်သည်။
နောက်တာပါကွာ.. ငါ့သား အငယ်လေးကျတော့ ဉာဏ်ထက်မယ့် ပုံ။ စကားကလည်း ပြောတတ်သလား မမေးနဲ့ဟေ့.. သူ့ အဘွားကဆို သူ့ကို အသည်းစွဲပဲ။ အငယ်ကောင်လေး မွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှ အဲဒီ ယောက္မကြီးက င့ါကို အမြင်ကြည် လာတာ။ ဒီကောင်က နိမိတ်ကောင်းတဲ့ ကောင်လို့ ပြောရမယ်။ ဒီသားနှစ်ကောင် လူလူသူသူ ဖြစ်တဲ့ အထိ ငါ ကြိုးစားရမှာပဲ
အင်း.. ကြိုးစားတာလည်း ကြိုးစားကြတာပေါ့ အကိုရာ။ ကျန်းမာရေး ထိလောက်အောင် ကျနော်တို့ တာတို ပြေးနေ ရတော့ ကြာရင် မလွယ်ဘူး
လတ်တလောတော့ မတတ်နိုင်သေးဘူး ငါ့ညီရာ။ ဒီဝဋ်ကြွေးက ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ်ပဲလေ။ ဒို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ပြန်ပြီး အခြေတည်နိုင်ဖို့က ရေ လိုတာကိုး။ ဒီတော့ ငါတို့ ရသလောက်တော့ လုပ်နေရအုံးမှာပဲ
ကိုအောင်ကြီးရဲ့ စကားသံအဆုံးမှာ သူရော ကျနော်ပါ တဒင်္ဂ တိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။ ကိုယ့်အရေးနဲ့ ကိုယ်တွေမို့ အတွေး တွေကလည်း ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ နဲ့အတူ ဒွေးရော ယှက်တင် ဖြစ်နေကြသည်ပေါ့။ ဘာလိုလိုနဲ့ သင်္ကြန်လည်း နီးလာ ချေပြီ။
အမေ တရားစခန်း ဝင်ခါနီး ငွေလေးလည်း အမှီ ပို့လိုက်ချင်သည်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ရဲ့ တဦးတည်းသော ညီလေးကလည်း လည်ချင်ပတ်ချင်၊ ဝတ်ချင် စားချင်ရှာမည်။ ဒါကြောင့် နောက်ရက်တွေလည်း foreman တွေမြင်သာအောင် အလုပ်ကို ကြိုးစား ရပေလိမ့်အုံးမည်။ သြော်.. ငွေ.. ငွေ.. အချိန်တိုင်းမှာ သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်နေနိုင်ဖို့က ဒီအရပ် ဒီဒေသမှာတော့ ကျနော်တို့လို ကောင်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ပဲ လဲခွင့် ရနိုင်မယ်လေ။ ရွှေပြည်ကြီးကနေ ပညာတွေ သိပ်တတ်လို့ လာကြ တဲ့ သူတွေလည်း ကျနော်တို့ရှေ့တင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖိနှိပ်ခံ နေရတာပါပဲ။ ဒီတော့ စိတ်ဖိစီး ခံရမှုချင်း မကွာလှဘူးပေါ့။ အတွေးထဲ မျောနေခိုက်.....
ဟေ့ရောင်.. သင်္ကြန်နီးလာတော့ မင်းကောင်မလေးကို သတိမရဘူးလား
လို့ ကိုအောင်ကြီးက လှမ်းမေးသည်။ သူလည်း သူ့မိန်းမကို သတိရနေရင်းက ကျနော့ ကောင်မလေးကို ကျနော် သတိရအောင် စကားစ ပေးသည်လား မသိ။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျနော့်မှာလည်း နှလုံးသားထဲက ချစ်ရတဲ့ချစ်သူ ရှိနေသေးသည်လေ။ အတွေးတွေထဲ အမြဲရှိနေတတ်တဲ့ သူမ မျက်နှာလေးသည် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကြားထဲက ပြန်မြင်ယောင်လိုက်တိုင်း ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် ဝင်းပနေတတ်သည်။ ကျနော့ အိပ်မက်တွေမှာ သူက ညတိုင်းလိုလို သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ ပြုံးနေတတ်သည်။
မိသားစုအတွက် ခိုင်မာတဲ့ ဘဝတခု အမြန် တည်ဆောက်ချင်တဲ့ စိတ်၊ ပြီးတော့ သူမနဲ့ အမြန်နီးချင်တဲ့ စိတ်၊ အဲဒီ စိတ်တွေကြောင့်လည်း ဒီကို ရောက်လာခဲ့ရသည်။ သူမ ကတော့ ကျနော့်ရဲ့ သဘောထား ဆန္ဒတွေအတွက် ဘာမျှ မကန့်ကွက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီကိုလာမယ်ဆိုတာ သေချာစွာ သိရတဲ့နေ့က သူမကို အဲဒီကိစ္စပြောပြတော့ သိမ့်ကနဲ တုန်သွားပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်တဲ့ သူမရဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေး ပေါ်မှာ လှိုင်းထန် သွားခဲ့ရသည်။ တသက်တာ နီးခွင့်ရဖို့ ခဏတာ ခွဲခွာမှုအတွက် ဖြေသိမ့်နိုင်ပါစေ ချစ်သူ။
ဟကောင်.. ငါမေးတာရော ကြားရဲ့လား။ ကောင်မလေးအကြောင်းလည်း မေးလိုက်ရော အသံပါ တိတ်သွားတာပဲ
ဆောရီး အကိုရာ.. ကျနော်လည်း အတွေး လွန်သွားတယ်
ငါ သိပါတယ်ကွာ.. ဒါကြောင့် မင်းကိုဆက်မမေးပဲ စောင့်နေတာ။ သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချသံကြားပြီမှ ထပ်မေးလိုက်တာ။ ဘာမှ သိပ်တွေးမနေနဲ့ ငါ့ညီရေ။ ငါတို့မှာ မနက်ဖြန်တွေ အတွက် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာနေဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒီတော့ အိပ်ချိန် ရောက်တာနဲ့ အိပ်ဖို့သာ ပြင်ဆင်ပေတော့
ဟုတ်ကဲ့အကို ကျနော်လည်း အခု အိပ်တော့မယ်။ ကျနော် မီးထပိတ် လိုက်တော့မယ်နော်
အေး.. အေး.. ဘုရားလည်းရှိခိုးပြီးမှ အိပ်နော်
ဆိုပြီး ကျနော်က မီးထ ပိတ်လိုက်သည်။
ကိုအောင်ကြီးဆီမှ ဘုရားဝတ်ပြုသံ သဲ့သဲ့မျှကြားပြီး ကျနော်လည်း ဘုရားဝတ်ပြုကာ အိပ်ချ လိုက်တော့သည်။ အိပ်ခါစ မျက်လုံး စမှိတ်လိုက်ချိန်မှာတောင် ဝရိန်မီးတွေက တဖွားဖွားနှင့် ပြန်မြင်ယောင်နေ သေးသည်။ နေ့စဉ် ထိတွေ့နေရတဲ့ အလုပ် ဆိုတော့လည်း အမြဲလွှမ်းမိုး နေတတ်သည်ပေါ့။ ဒီ ဝရိန်မီးတွေ တဖွားဖွားနဲ့ တောက်လောက်နေသလို ကျနော်တို့ နှလုံးသားထဲက သမုဒယ မီးတွေကလည်း တဖွားဖွား တောက်လောက်နေသမျှ ဒုက္ခ ပင်လယ်တွေထဲ သံသရာ တလျှောက် ကူးခတ် နေကြရအုံးမှာ ပေါ့လေ။ ထိုအခိုက် အမေ့ရဲ့ဘုရားရှိခိုးပြီး မေတ္တာပို့နေကြ အသံလေး ကြားယောင်မိသလိုလို ခံစားရပြီး နှလုံးသားက ခဏတာ ငြိမ်ဝပ်သွားသည်။ အဲဒီနောက်… ဆန္ဒလွန် အိပ်မက်တွေထဲ ကူးခတ် ဖြစ်သည်ပေါ့။
.............................................. ။ .................................................
သင်္ဘောကျင်း ထဲကို မနက် ၇နာရီ ထိုးပြီဆိုတာနဲ့ ဝင်ရတာမို့ အဆောင်မှ ရှိသမျှ အလုပ်သမား အကုန်လုံးဟာ မနက် ၆နာရီတည်းက စုစုရုံးရုံးနဲ့ အဆောင်ရှေ့ တန်းစီလို့ ကြိုပို့ကားကို စောင့်ကြရသည်။ ကျနော်တို့လည်း ထိုနည်း၎င်းမို့ ကားစောင့်ရင်း အသင့် ဖျော်လာသော ကော်ဖီမစ်ကို သောက်ကာ စောင့်နေလိုက်သည်။ yard ထဲရောက်တော့ Time card ရိုက်သည်။ ထို့နောက် မိမိ လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာ ပြန်လည် ပြင်ဆင်နေသော သင်္ဘောဆီသို့ ခပ်သွက်သွက် သွားရသည်။ မိမိထက် စောလျင်စွာ ရောက်နေတတ်သော foreman တွေမြင်အောင် အလုပ် လုပ်ရန် ပြင်ဆင် ပြကြရသည်။ ဒါမှ သူတို့ ကြည်ဖြူမှာပေါ့။
မိမိတို့ အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းပစ္စယများ အသင့်ဖြစ်သောအခါ ၁၀မိနစ်ခန့် safety နဲ့ ပတ်သက်သည်များကို Yard ထဲမှာ safety officer များက ထပ်မံ မှာကြားကြသည်။ ထိုနောက်တွင် မိမိနှင့်ဆိုင်ရာ သဘောင်္များပေါ်သို့ တက်ကာ အလုပ် လုပ်ကြရတော့သည်။ မိမိနှင့် ကိုအောင်ကြီးက သင်္ဘောတစီးတည်း အလုပ် လုပ်ရသည်ဆိုတော့ သင်္ဘောပေါ်တက်ရန် foreman ကို လှမ်း သတင်းပို့လိုက်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က ဦးစွာ သင်္ဘောပေါ်တက်ပြီး လုပ်ကွက်များကို စစ်ဆေးကာ မိမိတို့အား အလုပ်လုပ်ရန်နေရာ ချပေးလေ့ရှိသည်။ သူက OK ဟု အချက်ပြသောအခါ သဘောင်္ ကုန်းပတ်ပေါ် အရင်တက်၍ ထိုမှတဆင့် ၀မ်းထဲသို့ Man Hole အပေါက်တွေ မှတဆင့် ဝင်လာခဲ့သည်။ ဒီနေ့တော့ ကိုအောင်ကြီးနဲ့ ကျနော် တခန်းတည်း အတူတူ ဝရိန် ဆော်ရမည်မို့ လေစုပ် ပန်ကာသံတွေ၊ ဝရိန်ဆော်တဲ့ အသံတွေ၊ တဖက်ခန်းမှ တူ ထုရိုက်သံတွေ ဆူညံ နေပေတော့မည်။ သူရော ကျနော်ပါ လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်နေကြသည်။ ထိုအခိုက် foreman က လေစုပ်ပန်ကာ လာပို့မည် ရသလောက်လေးပဲ ဝရိန် ဆော်ထားနှင့်ကြဟု လာရောက် မှာကြားသည်။ လေစုပ် ပန်ကာမရှိပဲ နှစ်ယောက် ဝရိန်ဆော်လျှင် အငွေ့တွေနှင့် အသက်ရှုကျပ်ပြီး သေဖို့သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်က
အလုပ် မလုပ်ဘူး ဗျာ
ဆိုပြီး သင်္ဘောခန်းထဲ ထိုင်မည် ပြုသည်။ ထို foreman ကုလားတွေက သူတို့ အလုပ်ပြီးဖို့ လောက်သာ ကြည့်တတ် သည်။ တကယ်တမ်း မိမိတို့ကို သိပ်ညှာသည် ဆိုတာ မရှိပေ။
ကိုအောင်ကြီး ကတော့ မိမိတို့အား ကုလား စိတ်ခုမည် စိုးသဖြင့် နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် အလုပ် လုပ် ကြရအောင်ဆိုကာ......
လာပါကွာ မင်းရော ငါရော ညက အအေးမိလို့ နှားခေါင်းတွေ ပိတ်နေတာပဲ။ အနံ့သိပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုပြီး ရီစရာ ပြောကာ အခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ တကယ်လည်း နှာမွှန်နေသဖြင့် နှာခေါင်းတွေ ပိတ်နေကြသောကြောင့် သိပ်မဆိုးလှ ဟု ဆိုကာ နည်းနည်းပါးပါး လုပ်ရန် ပြန်ဆင်လိုက်သည်။
ဒါဆို ဒီလိုလုပ်ဗျာ.. ကျနော် အရင်အလုပ် လုပ်နှင့်မယ်။ အကိုက ကျနော့်ကို ခဏစောင့်ပေး။ ကျနော် ပြီးတော့မှ အကိုက နည်းနည်းလုပ်ပေါ့
အိုကေ.. ဖြစ်တယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ လုပ်ကြတာပေါ့
ဟုပြောကာ ဘေးတွင်ရှိသော ပုံး အလွတ်တလုံးကို မှောက်ကာ ထိုင်နေသည်။
မိမိတို့ အခန်းထဲတွင် ညဆိုင်းမှ အလုပ် လုပ်သွားကြသော Fitter များမှ သူတို့၏ လုပ်လက်စ Acetylene Gas ပိုက်များကို လုံအောင် ပိတ်မသွားကြသောကြောင့် ထို ဓာတ်ငွေ့များသည် အခန်းထဲတွင် ပျံ့နှံ့နေသည်။ ထို အချင်းအရာကို ကျနော်တို့၏ နှာခေါင်းမှ အနံ့ကောင်းစွာ ခံစားလို့ မရခဲ့သဖြင့် သတိမမူ မိကြတော့ပေ။ ကျနော် ဝရိန် စဆော်ဆော်ချင်း ကိုအောင်ကြီးက ဂတ်စ်ပိုက်ကို မြင်သွားပြီး
ဟု လှမ်းတားသံကို ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရသည်။ ဒါပေမယ့် လက်ထဲက ဝရိန်ဂေါက်တံ အား အလုပ် လုပ်ရမည့် သံထည်ပေါ် ချမိပြီး မီးတွေ ပွင့်ထွက်သွား၏။ "ဝုန်းကနဲ" ပေါက်ကွဲ သံနှင့်အတူ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းလေးထဲ မီးခိုးငွေ့တွေ အူလှိုင်လို့ မှောင်မဲ သွားတော့သည်။
............................................... ။ .................................................
ညက ရွာထားသည့် လက်ဆေး မိုးကြောင့် ထင်သည်။ အိမ်ရှေ့ ပိတောက်ပင်ကြီးမှ အပွင့်တွေ ဝါထိန်နေအောင် မြင်နေ ရ၏။ သင်းပျံ့နေတဲ့ ပိတောက်ပန်း ရနံ့တွေ၊ မြေသင်းနံ့တွေ နဲ့အတူ လေပြေကလေး ကလည်း ပက်ဖျန်း အေးမြမြ ရှိလှသည်။ အဆိပ်ငွေ့တွေကို နေ့စဥ ရှုရှိူက်လို့ ကာလရှည်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကျနော်က ဒီလို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကို တမ်းတမ်းတတ ငတ်မွတ်နေတာ ကြာလှပါပေါ့။ အမေက တရားစခန်း မဝင်ခင် အငယ်ကောင်နဲ့ ကျနော့်ကို အိမ်မှာ ကောင်းကောင်းနေဖို့ မှာရစ်သည်။ ကျနော် ကလည်း ညီလေး အတွက်ရော ကျနော့် အတွက်ပါ စိတ်ချဖို့ အမေ့ကို ပြောရသည်။
အကြိုနေ့ မနက်တွင် ညီလေးနဲ့အတူ လမ်းထိပ်က ရေပက်မဏ္ဍပ်ကို ရောက်လာခဲ့သည်။ လမ်းထိပ်သို့ ရောက်ခါနီးသော် ညီလေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် သူ့အဖေါ်တွေ မဏ္ဍပ်ရှိရာသို့ အပြေးဝင်သွားသည်။ မဏ္ဍပ်ထဲတွင် ကိုအောင်ကြီး သားနှစ်ကောင်၏ ဆူဆူညံညံ ရေကစားသံမှာ အကျယ်ဆုံး ဖြစ်နေပြီး ကိုအောင်ကြီး ကလည်း သူ့သားတွေ နဲ့အတူ တဟားဟား ပျော်မြူးနေသည်ကို မဏ္ဍပ်နား မရောက်သေးသော ကျနော်ပင် အဝေးမှ အတိုင်းသား ကြားနေရ၏။ ထို့နောက် ကျနော် ချစ်သော သူမသည်လည်း ရေဖလားလေး ကိုင်လို့ ကျနော့်အား ပြုံးပြုံးလေး စောင့်ကြို နေလေတော့ သည်။ သြော်.. သူမ ပါးကွက်လေးတွေ ရေတောင် မစိုသေးပါလား…။
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:26 AM
ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့် သုံးမှာ
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ပါ ....။။
သတိတရနဲ့ရွတ်ဆိုနေဆဲပါပဲ....ဖခင်
ဖခင်မြတ်နိုးတဲ့အမိမြေကို
ပြန်လာကြည့် လှဲ့ ပါ.......။ ။
မြင်ရပါလိမ့် မယ် .....။ ။
သူတို့ မေ့ လဲ
အမှတ်ရဆဲပါ ဖခင်.....။ ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:34 AM
ကမ္ဘာချီပြီ စာမဖွဲ့ ပါဘူး
သူဆီသို့ ..............။ ။
ငါ့ရဲ့ အလွမ်းဆိုတာ
ငါ့ရဲ့ အူကြောင်ကြောင်စိတ်ကို
မင်းကိုလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ ဘဲ
ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်တော့ မယ်......။ ။
တခါတလေ ဒီအလွမ်းတွေနဲ့ 
ငါ့အလွမ်းတွေ
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:05 AM
တို့ အားလုံးရဲ့ အဖေ
သားတို့ကို မြတ်နိုး ချစ်ခင်သော အဖေ၊ အမေ့ကို ယုယ ချစ်ခင်သော အဖေ။ သားတို့ ချစ်သော တုနှိုင်းမဲ့ အဖေ၊ အသက် (၇၀) ကျော်လေပြီဖြစ်သော အဖေသည် တခါတခါတွင် ဟိုဟာ သည်ဟာ ထွေတလာတို့ကို မေ့လျော့ တတ်စ ပြုလာလေပြီ……ဇရာတို့၏ သဘော မနောတွင် စိုက်လိုက်မတ်တပ် လိုက်နာရလေပြီ။
ပိုက်ဆံ ဘယ်နားထားမိသည်ကို မမှတ်မိခြင်း။ သော့ခတ်ပြီး သော့မေ့ကျန်နေခြင်း။ သားတို့အပေါ် ချစ်ခြင်း ဇောဖြင့် အရာရာ တွေးပူပန်မှု ပိုမိုလာခြင်း စသည်တို့ကို တွေ့လာရသည်။ ဘာတွေကို ဘယ်လိုမေ့မေ့ သားတို့ အိမ်ပြန်ချိန် မြေးတို့ ကျောင်းလွှတ်ချိန်ကိုတော့ အဖေ မမေ့သေးပါ တကား။ အရေပြား အရေးအကြောင်း တို့သည်လည်း တစတစ ထင်းသထက်ထင်း လာသည်။ တွန့်သထက် တွန့်လာသည်။ ဦးခေါင်းထက်က ဆံစတို့ ဖွေးဖြူလာပြီ။ သွားတို့ တတိတိ တချောင်းပြီး တချောင်း ကျိုးလာပြီ။ အဖေ့ပါးပြင်သည် သားတို့ ငယ်ငယ်က အဖေ ညွှန်ပြခဲ့ဖူးသည့် လကမ္ဘာပေါ် ထင်သည့် အရိပ်ထဲက ဆန်ဖွပ်တဲ့ အဘိုးအိုလိုပင် ချိုင့်ဝင် ပိန်လှီးလာချေပြီ။ ဘယ်လိုပင် ဇရာသရုပ်ပြပြ ။ အိုမင်းမှု အဟုန်မြန်မြန် အဖေ့၏ သားတို့အပေါ် ချစ်သော ချစ်ခြင်းကား မလျော့ပါး သွားချေ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အရာရာ မေ့လျော့ တတ်စဖြစ်သည့် အဖေ့ဇရာကို မလွှမ်းနိုင်ဟု သားတို့ ယုံကြည်သည်။ အဘယ်အကြောင်းများကြောင့် ဆိုလျှင်ကား သားတို့အပေါ် မယုတ်လျော့သော မေတ္တာဖြင့် အဖေ ချစ်မြတ်နိုး နေသေး သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ချစ်သော အဖေ့တွင် ဇရာ၏ နှိပ်စက်ခြင်းကြောင့် မေ့လျော့ခြင်းတို့ မည်မျှ ရှိစေ။ အဖေ့ကို သားတို့ နားလည်နေပါမည်။ အမေ့ကို သားတို့ ချစ်ခင်နေပါမည်။ ဒါသည် မြန်မာတို့၏ ချစ်မြတ်နိုးဖွယ် အကောင်းဆုံး ဓလေ့စရိုက် ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်မှသည် ယနေ့တိုင် စာပေ၊ သီချင်း ဇာတ်စုံခင်း ကြည့်ရသည် များတွင် မာတာ မိခင် ဆိုတာကိုပဲ ကြားရဖန် များခဲ့၏။ ကျေးဇူးရှင် အဖေ ဆိုသော အကြောင်းကို တခုတ်တရ အလေးအမြတ်ပြု ရေးကြ ပြောကြတာ နည်းသည်ဟု ထင်မိ၏။။ တကယ်တော့ မိသားစုတစု ခန့်ထည် တည်မြဲဖို့ တာဝန် အရှိဆုံးသူဟာ အိမ်ထောင် ဦးစီးဖြစ်သူ အဖေ ဖြစ်သည်။ သားသမီးတွေကို ရင်အုပ်မကွာ ဖေးမ မေတ္တာဖြင့် ထွေးပိုက်ယုယ မြေတောင်မြောက် ပဲ့ပြင်သူက အမေဆိုလျှင် အမေ့ကို သားသမီးတွေ အနား မခွဲမခွါ နေနိုင်အောင် အဖေက အရာရာ အကျိုးဆောင်ကြဉ်းပေးသူ ဖြစ်သည်။ အဖေသာ ငွေမရှာပဲ မိသားစုကို လူတန်းစေ့ စားနိုင်သောက်နိုင်အောင် မထားလျှင် မိခင်သည်လည်း သားသမီးတွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်မည် မဟုတ်။ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် တန်းတူ အဖေဖြစ်သူ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ စရိုက် အလေ့အထ ဦးဆောင် ပဲ့ပြင်မှု အကောင်းအဆိုး ပေါ်မူတည်ပြီး သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ကျနော်တို့ လက်ခံသည်။ ဒါကြောင့် ကျနော်သည် အမေ့ကိုရော အဖေ့ကိုပါ တန်းတူ ချစ်သည်။ အဖေမရှိလျှင် အမေမရှိ။ အမေ မရှိလျှင်လည်း အဖေဆိုတာ ရှိမလာနိုင်။ မိဘဆိုသည်ကား လူသားများအတွက် အဖိုးအနဂ္ဂ အနှိုင်းမဲ့သော ကျေးဇူးရှင်များသာ မဟုတ်ပါလော။
လာမည့်ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပင် မိဘများ နှစ်လေးဆယ်မြောက် မင်္ဂလာရတု တိုင်တော့မည် ဒီစာစု ဘုန်းတော်ဘွဲ့သည် မွေးကျေးဇူး ကို နို့တစက်ဖိုးမျှ ကျေတန်ကောင်း၏၊ တလောက မိတ်ဆွေ တယောက် ပေးပို့လာသော မေးလ် တစောင်ထဲမှာ အဖေဆိုတာနှင့် ပတ်သက် စပ်လျဉ်းသော ဗီဒီယို ဖိုင်လေးတခု ပါလာ၍ ကြည့်ရသည်၊ ရုရှား ဘာသာလား ? အီတာလျံလား ? မသိတဲ့ ဘာသာ စကားပြောဖြင့် အဲဒီ ဗီဒီယို ဖိုင်လေးထဲမှာ သားအဖ နှစ်ယောက် ပန်းခြံလေးထဲမှာ စကားထိုင်ပြောနေပုံလေး ရိုက်ပြထားသည်၊ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ်ပင် အဖိုးကြီးနှင့် အသက် နှစ်ဆယ်ကျော် သူ့သားတို့ အချီအချ စကားပြောနေပုံလေးပေါ့။
တုန်တုန်ချိချိ အဖိုးအို က ပန်းခြံထဲက ငှက်ကလေးတကောင် အော်မြည်သံကို နားစွင့်ပြီး သူ့သားကို မေးသည်၊ “ဘာသံလေးလဲ ဘာလေးလဲ ” ပေါ့။ သတင်းစာဖတ်နေတဲ့ သူ့သားက ခပ်ဆတ်ဆတ် ပြန်ဖြေပုံမှာ “စာကလေး” ပါ။ တဲ့..... အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းနေဟန် ရှိတဲ့ အဖိုးအိုက သိပ်မကြားရပုံနဲ့ တခါ ထပ်မေးပြန်တယ်။ “အခု ကျလိ ကျလိနဲ့ အော်နေတဲ့ အသံလေးဟာ ဘာသံပါလိမ့်” ပေါ့။ သတင်းစာဖတ်နေတဲ့ သူ့သားက စိတ်နည်းနည်း တိုလာပုံနဲ့ တချက် လှည့်ကြည့်ပြီး။ “စာကလေး ပါဆို...”. နည်းနည်း ဆူအောင့်လာတဲ့ အသံနဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ် ပြန်ဖြေပြန်ရော .....။ ခဏနေတော့ အဖိုးအိုက စာကလေး သူ့ရှေ့ ဖြတ်ပျံသွားတာကို လိုက်ကြည့်ပြီး အဲဒါ ဘာလေးလဲ လို့ ထပ်မေးပြန်တယ်။ သူ့သားဟာ အင်မတန် စိတ်ဆိုး ဒေါသ ထွက်နေပုံနဲ့ “စာကလေး စာကလေး စာကလေး ပါဆိုနေမှ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်”ပေါ့။ ဒေါသတကြီး ပြန်ပြောတော့တာပဲ။ အဲဒီ အခါမှာ အဖိုးအိုဟာ ကတုန်ကယင်နဲ့ သူ့သားလေးကို ခဏနေပါအုံး သားရယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ လက်ကလေး ကာပြပြီး မလှမ်းမကမ်းက သူတို့ အိမ်ထဲကို တုန်တုန်ချိချိနဲ့ ၀င်သွားပြီး စာအုပ်ဟောင်းလေး တအုပ် ယူပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်။
ပြီးတော့ သူ့သားကို နားထောင်နော် ဆိုပြီး စာအုပ်ထဲက ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကို ဖတ်ပြတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ဟာ သူ့ ဒိုင်ယာရီပါ။ အခု သူ့ဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ သူ့သား ခပ်ငယ်ငယ် စကားပြော တတ်ကာစ အရွယ်တုန်းက ရက်စွဲတွေမှာ ရေးမှတ် ထားတာပါ။ သူ့သားလေး တီတီတာတာ က ဒီပန်းခြံထဲမှာ သူတို့ သားအဖ ထိုင်နေတုန်း စကားတွေ မေးတယ်တဲ့။ အခုပျံသွားတဲ့ ငှက်ကလေးကို ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ မေးတယ်တဲ့။ သူ့သားလေး မေးတဲ့ အခါတိုင်း အဖေဖြစ်တဲ့ သူဟာ အဲဒီ ငှက်ကလေးဟာ စာကလေး ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ဖြေ ဆိုခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။ သူ့သားက ဘယ်လောက် အမေး အမြန်း ထူသလဲ ဆိုရင် စာကလေး ငှက်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၂၃ ခါတိတိ သူပြန်ဖြေခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင် ရေးသားထားခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်လေးကို သူ့သားကို ဖတ်ပြရှာတယ်။
အဲဒီတော့မှ သားဖြစ်တဲ့ လူငယ်လေးဟာ သူ့အဖေရဲ့ သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တဲ့ စေတနာ မေတ္တာကို နားလည်သွားပြီး သူ့အဖေကို နမ်းရှုပ် တောင်းပန်ပါတော့တယ်။ ဗီဒီယိုလေးကတော့ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ညွှန်းချက်က အတော် တာသွားတော့ လူ့လောကထဲက အနှိုင်းမဲ့တဲ့ မေတ္တာပိုင်ရှင် အမျိုးအစားဖြစ်သူ ဖခင်မေတ္တာကို ဖေါ်ညွှန်းပြနိုင်ခဲ့တယ်။ တကယ်လည်း လူ့လောကမှာ ဖခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာစွမ်းပကားနဲ့ ပွင့်လန်း လာရတဲ့ အဖိုးတန် လူသားတွေ အမြောက်အများ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွေ ဆင့်ကဲ တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဖခင်တွေဟာ အဖေတွေရဲ့ စေ့ဆော်ပဲ့ပြင် လွှမ်းမိုး ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့ ထူးချွန်ခဲ့သူများ ဖြစ်လို့ပါ။ ဖခင်မေတ္တာ မရခဲ့တဲ့ ကလေးတွေဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ စိတ်ရောဂါ တခုခုကို ခံစားရလေ့ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ သားသမီးတို့ရဲ့ ငယ်ဘ၀အပေါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လွှမ်းမိုး နိုင်သူဟာ ဖခင်ပါဘဲ။
အဖေတိုင်း အဖေ ပီသကြရဲ့လား ဆိုတာကိုတော့ သဘာဝ တရားကြီးက တရားသေ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်း မပေးခဲ့ပါဘူး ။ အဖေ မပီသတဲ့ အဖေတွေ ၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြသနာတွေ ကြီးမားတိုင်း ဖခင်တို့ တာဝန်ကို လစ်လျူရှု့ တတ်တဲ့ ဖအေဆိုး မျိုးတွေလည်း လူ့လောကမှာ ရှိနေတတ်သေးတယ်။ အလင်းအမှောင် အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ လောကမှာတော့ ဆန်းကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ လူသားတွေ အနေနဲ့ လူပီသတဲ့ ဖခင်စိတ်တော့ ဖခင်တိုင်းမှာ ရှိစေချင်မိတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တခါတလေကျ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်တွင်း လူနေမှုစံနစ်မှာ မြင်နေရ ကြားနေရ တာတွေက အတော့်ကို မချင့်မရဲ ဖြစ်စရာတွေ ပေါ်လာတော့ မနေနိုင်ဘူး။ သားသမီးတွေ မွေးထားပြီး ဖအေ မပီသတဲ့ လူတချို့ကြောင့် ရတက်မအေး ဖြစ်မိပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်း မရှိတဲ့ နိုင်ငံတခု ပျက်သုဉ်းဖို့ နီးသလိုပေါ့။ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်း မရှိတဲ့ မိသားတစုဟာလည်း သားတွေ သမီးတွေ တေလေလွင့်တဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာဖို့ များပါတယ်။
စာရေးသူတို့ အိမ်နားက မိသားတစုကို ကြည့်ပြီး သူတို့ သားသမီးတွေကို အတော် သနားမိတယ်။ တကယ့် တရားခံ အရင်း စစ်လိုက်ရင်တော့ နိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့ စံနစ်ယွင်းမှုက စပြီး ပြောရမှာပါ။ အဲဒီမိသားစုမှာ သမီးတယောက် သားတယောက် ရှိပါတယ်။ သားလေးက ဆယ်တန်းဖြေတော့မှာပါ။ သမီးကတော့ အိမ်စီးပွားရေး အတွက် အလုပ် လုပ်နေပါပြီ။ အိမ်ကို ပြန်ထောက်ပံ့ လုပ်ကျွေးနေပါပြီ။ သူတို့မှာ ဘယ်လို ဒုက္ခဆိုးမျိုး တွေ့နေရသလဲ ဆိုတော့ သူ့ဖခင်ဟာ အရက်ကျွန်ဖြစ်နေပြီး ညတိုင်း သားမယားပေါ် မူးယစ်သောင်းကျန်း ဆဲဆို ရိုက်နှက် နေတတ်လို့ပဲ။ သားတွေ သမီးတွေကလည်း ပြန်လှန် ပြောဆိုရိုင်းပြခြင်းတော့ မရှိကြပါဘူး။ ငရဲကျမှာ စိုးလို့ ထင်ပါရဲ့။
စိတ်မကောင်းကြီးစွာ သတိထားမိတာက သားသမီးတွေက သူတို့ အဖေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေထဲမှာ ပါလာတဲ့ အေးစက်စက် အစိမ်းရောင် မျက်ရိပ်ရိုင်းကြီးတွေပါ။ သူတို့ အဖေဟာ သူသောက်ဖို့ အရက်ဖိုး ရှာပေးနေရတဲ့ သမီးလည်း မချန်၊ မိန်းမ လည်း မချန် ဆဲဆို ရိုက်နှက်လေ့ ရှိတာကြောင့် ညည သူ မအိပ်မချင်း ဘယ်သူမှ အိမ်ထဲမှာ မနေရဲကြရှာဘူး။ အပြင်ကို ထွက်ပုန်းနေရတာ ညတိုင်းပဲ။ ဘယ်လောက် သနား စရာကောင်းလိုက်တဲ့ သူတို့ ဘ၀လေးတွေလဲ။ ဘယ်လောက် ဖအေ မပီသတဲ့ ဖခင်လဲ…… စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်း၏။
အဲဒီ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကတော့ လိမ်မာရှာသည်။ ညဘက် ညဘက် စက်ဘီးတစီးနဲ့ အသိအိမ်တွေ လျှောက်လည်ပြီး စာကျက်ရတယ်။ ပုန်းနေရတယ်။ သူတို့ဘ၀ကို ပျက်ဆီးမသွားအောင် သူတို့ ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြသည်။ အဲဒါ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ထဲက လူနေမှု ဘ၀ တခုပါပဲ ။ ဒီထက် ဆိုးတာတွေ အများကြီး ရှိနိုင်သေးသလို။ အဲဒီလို အဖေဆိုးမျိုးနဲ့ မတူပဲ သားသမီးတွေကို မေတ္တာအဟုန်ထု ကြီးမားလွန်းစွာနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဖခင်တွေလည်း အများကြီး ရှိပါသည်၊ ဖအေပီသတဲ့ အဖေတွေထဲမှာ စာရေးသူတို့ အဖေဟာ ဖခင်စိတ် အရှိဆုံး အဖေတဦးလို့ ကိုယ်ရေသွေးသလို ဆိုဝံ့သည်။ ဘာပဲပြောပြော စာရေးသူတို့ သားငါးယောက်ရဲ့ အဖေ အသက်၇၀ကျော် နေသည့်တိုင် သားတွေပေါ် မေတ္တာမပျက် ယုယကြင်နာ ချစ်ခင်ပဲ့ပြင်မှုကို ရနေသေးတာ ကိုက လောကရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဆုတခုကို ရာသက်ပန် ပိုင်ခွင့် ရထားသလို ဘ၀င်ဖို ကြည်နူးမိတာ အစဉ်ပင်။ အဖေ့ကို ချစ်သည်။ သားအဖတွေ ကြားမှာ မုန်းတီးခြင်းမရှိ။ ချစ်ခြင်းသာ ရှိနေမည်သာ။
စာရေးသူတို့ သားအဖ ကြားမှာ အဆင့်အတန်း မရှိ၊ တံတိုင်းများ မခြား၊ သွေးချင်းသားချင်း မိဘနှင့် သားသမီး အချစ်သာ ရှိသည်။ အဖေသည့် ကျနော့်တို့ အတွက် ထာဝရ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည်။ အမေသည် ကျနော့်အတွက် ထာဝရ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည်။ ဇရာရိပ်ခုံလှုံလာနေပြီ ဖြစ်သော မိဘတို့သည် ကျနော်တို့ သားသမီးများ အတွက်တော့ အစဉ်အမြဲ နုပျိုနေဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဘာနဲ့မှ အစားထိုးဖွယ် မရှိသည့် ခိုလှုံရာ အေးမြသော မေတ္တာရိပ်မြုံ ဖြစ်နေဦးမည်သာ။ ဘ၀၌ သောကအမောတွေ တွေ့တိုင်း အမေ့အပြုံး အဖေ့ အားပေး စကားလုံး တွေကို ကြားယောင်ကာ အားဖြည့်နေအုန်းမည်သာ ဖြစ်သည်။
အဖေ၊ အမေတို့ရဲ့ တူမျှသော မိဘမေတ္တာဖြင့် ပွင့်သောပန်းတိုင်း လန်းစေချင်မိသည်။ အဖူးတိုင်း ငုံရမည်။ အငုံတိုင်း ပွင့်ရမည်။ ညှာတံတိုင်းလည်း ရင့်သန်ခိုင်မာ စေချင်သည်။ အဖေ၊ အမေ နှစ်ဦးစလုံးဟာ သားသမီးတိုင်း အတွက် အနှိုင်းမဲ့တဲ့ မေတ္တာရှင်တွေ ဖြစ်စေချင်သည်၊ ဖခင်တိုင်း ဖခင် ပီသ ကြပါစေ။ ဖခင် ပီသတဲ့ ဖခင်တိုင်းကိုလည်း သားသမီးတွေက တန်ပြန်ယုယ ချစ်ခင်နိုင်ကြ စေချင်သည်၊ အဖေဆိုလျှင် အားလုံးအတွက် အနှိုင်းမဲ့ ဖြစ်စေချင်တော့သည်။
မောင်ချမ်းသာ(ဆိုက်ကား)နှင့် မနှင်းပုလဲ (ပဲပြုတ်)တိ...
မိုး စုန်းစုန်းချုပ်နေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်များစွ...